ပေးသော်လည်း အရစ်ခံရနေသူများထံမှ အသံထွက်လာပြီ။
“ပေးတာက ပေးတယ်၊ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပေးရဲ့သားနဲ့ အရစ် (ညစ်) ခံရတာကို စိတ်နာတာ” ဟု ဆိုလာသူက အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဂိတ်တံခါးဟုဆိုရမည့် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက် လုပ်ကိုင်နေရသူများထံမှ ယင်းကဲ့သို့ ညည်းတွားသံများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်လာသည့် ကုန်စည်များနှင့် နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်သွားသည့် ကုန်စည်များကို စိစစ်ကာ အခွန်ကောက်ခံစည်းကြပ်ရန် တာဝန်ယူထားသည့် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ‘အပေးအယူ’ မှာ မပါမဖြစ်။ လာဘ်ငွေမပေးသည့် ကုန်ပစ္စည်းဖိုင်မှာ မရှိသလောက် ဖြစ်သော်လည်း လာဘ်ငွေများများပေးသည့် ဖိုင်မှာ အချိန်မြန်မြန် ပြီးစီးနိုင်သည်ဟု အကောက်ခွန် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်နေသူများက ယုံကြည်ထားသည်။
အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ငွေတောင်းသံကို ယခုလို ကြားသိရသည်။
“အပြင်မှာလည်း ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်နေတာ မင်းလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီမှာလည်း ဒီဈေးနဲ့ မရတော့ဘူး၊ တိုးပေးဖို့လိုတယ်” ဟု အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိ အရာရှိတစ်ဦးက အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ လာဘ်ငွေ တောင်းခံနေသည့် သို့မဟုတ် ငွေညှစ်နေသည့် အသံဖိုင်ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် နားထောင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအသံဖိုင်ထဲတွင် ၅ သိန်း၊ ၈ သိန်း၊ ၁၁ သိန်း စသည်ဖြင့် လာဘ်ငွေတိုး တောင်းနေသံများကို ကြားနေရသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်သည့်အတွက် ‘ဂါ (ဂါရဝဈေးနှုန်း)’ ဈေးနှုန်းတက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပြောသည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏ စကားမှာ အတော်ပင် မှတ်သားစရာ ကောင်းလှသည်။
အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနနှင့် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်သူများအကြားတွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တင်းမာမှု မရှိသော်လည်း လူမှုရေးကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာများတွင်မူ အကောက်ခွန် ဝန်ထမ်းများ၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြချက်များ အများအပြား ပေါ်ထွက်လျက် ရှိသည်။ ယင်းအပြင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အတွင်းရှိ အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများ အကြောင်းနှင့် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များပြားရှုပ်ထွေးမှုနှင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုများအကြောင်း ရေးသားထားသော တိုင်စာတစ်စောင်ကိုလည်း သတင်းမီဒီယာအချို့သို့ ဖြန့်ဝေထားသည်။
အဆိုပါ တိုင်စာထဲတွင် အကောက်ခွန် အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများ၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ အကြောင်းပါဝင်ပြီး တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှ ကျပ်သိန်း ၉၀၀ ကျော်မှ သိန်း ၃၀၀၀ နီးပါး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ရှိနေကြောင်းနှင့် ယင်းငွေပေးရမှုကြောင့် အခွန်ရှောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ရေးသားထားသည်။
“မမှန်မကန် လုပ်ချင်တဲ့သူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ပေးနေရတာပါ။ ဒီလိုမှ မပေးရင်လည်း ကိုယ့်အလုပ်က တော်တော်နဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ ဘယ်လောက် ကြာမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး” ဟု အကောက်ခွန် အေးဂျင့်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် တံစိုးလက်ဆောင် ယူမှုများသည် သေချာစွာ တွက်ချက်ပြီးမှ ကျူးလွန်ကြသော ရာဇဝတ်မှုများ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ကျသည့် နိုင်ငံများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုမှာ ပျံ့နှံ့စွာရှိတတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ စီးပွားရေးအကြံပေး ဦးမြင့်၏ ‘အဂတိလိုက်စားမှု’ စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကုန်သည်များနှင့် အကောက်ခွန် အေးဂျင့်များထံမှ မကျေနပ်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် စည်းကမ်းတင်းကျပ်ခြင်းနှင့် ယခင်ကကဲ့သို့ ငွေပေးလုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ဒါက မမှန်မကန် လုပ်နေကျလူတွေ အခုလို စည်းကမ်းတင်းကျပ်လိုက်လို့ အသံတွေ ထွက်လာတာပါ။ အခုလက်ရှိဌာနရဲ့ အနေအထားနဲ့ အရင်တုန်းကနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ တော်တော်ကွာသွားပါပြီ” ဟု အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်နှင့် ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ကွာခြားသကဲ့သို့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းပိုင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ တိုးတက်လာကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လက်စာရင်းနှင့် ကွန်ပျူတာစာရင်း တွဲဖက်အသုံးပြုနေရသည့် လက်ရှိအကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု အကောက်ခွန်စနစ်သစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိပြီး ယင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ပါက ဝန်ထမ်းနှင့် ပြည်သူတိုက်ရိုက် ထိတွေ့ရန် မလိုတော့သည့်အတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု လျော့ကျသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်သည့် ဝန်ထမ်းကို အပြစ်တင်နေခြင်းထက် အကောက်ခွန်စနစ်ကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပြီး အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ အလိုအလျောက် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (Online စနစ်) ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် လိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ဆိုသည်။
“အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကို စာနာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပေးပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာလို့ ပေးတာပါ” ဟု အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ဆိုလာသည်။
ပေးသူရှိနေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု လျော့ကျရန် မဖြစ်နိုင်သလို တောင်းသူရှိနေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး မည်သည့်အခါမှ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိပေ။
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေရသည့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အနေနှင့် လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ‘ဆန်ပေးမှ ဆီရ’ မည့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုး မဖြစ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စတစ်ခုတွင် ပေးသူဘက်ကပေးရခြင်း အကြောင်းရင်းသည် အချိန်ကုန် သက်သာရေးနှင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အထိန်းအချုပ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဖြစ်ပြီး ယူသူသို့မဟုတ် တောင်းသူဘက်ကမူ လောဘနှင့် လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ဦးမြင့်၏ စာတမ်းတွင် ရေးသားထားသည်။
ကုန်စည်များ အဝင်အထွက် ဂိတ်ပေါက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် ယင်းကဲ့သို့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု များပြားနေခြင်းက ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမူ “အထူးသဖြင့် ကုန်စည်အဝင်အထွက် ဆိပ်ကမ်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ပြည်သူတွေနဲ့ အများဆုံး ထိတွေ့နေရတဲ့ ရုံးဌာနအသီးသီးနဲ့ စည်ပင်သာယာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပြည်သူတွေ မနှစ်မြို့မလိုလားတဲ့ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိနေခြင်းအပေါ် တာဝန်ရှိတဲ့ ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများက မသိကျိုးကျွန် ပြုမနေဘဲ ပြည်သူတွေကျေနပ်မှု၊ ယုံကြည်မှု ရှိလာတဲ့အထိ ဝန်ဆောင်မှုတွေ လျင်မြန်တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဖိဖိစီးစီး ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ မှာကြားလိုပါတယ်” ဟု ဆိုထားသည်။
လတ်တလော ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တင်သွင်းကားများ သောင်တင်နေခြင်းမှာမူ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တင်သွင်းကား အရေအတွက် များလာခြင်းကြောင့်ဟု အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနက ဆိုသည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးစ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း များလာခြင်းနှင့် ကားမူဝါဒ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကားတင်သွင်းမှု များလာရာ ယင်းကုန်ပစ္စည်းများကို စိစစ်ရှင်းလင်းရန် အကောက်ခွန် ဝန်ထမ်းများကို ယခင်ထက် ပိုမိုချထား ပေးစေလိုကြောင်း Distinct ကားရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဇေယျာကြည်က ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော အကောက်ခွန်စနစ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား မလုံလောက်မှုကို ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် မလိုအပ်သော ဝန်ထမ်းထုတ်နုတ် သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် လိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောဆိုသည်။
ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေရသော ကုန်သည်များ လက်ထဲသို့ ကုန်ပစ္စည်း အမြန်ဆုံး ရရှိရေးသည် အဓိကကျပြီး တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်းတွင် သောင်တင်ကာ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်း ကြန့်ကြာခြင်းသည် ဈေးကွက်ကို အနည်းနှင့် အများထိခိုက်မှု ရှိစေသည်။ “အဓိက ထိခိုက်နစ်နာတာကတော့ ကုန်သည်ပေါ့။ အချိန်ကိုက်ဖို့ လိုတယ်လေ၊ ဒီပစ္စည်းတစ်ခု ဈေးကွက်ထဲကို ဒီအချိန်ရောက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခုအကောက်ခွန် လုပ်ပုံမျိုးနဲ့ဆို သွားပြီပဲ” ဟု အကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှု အေးဂျင့်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကုန်သည်လက်ထဲသို့ ကုန်ပစ္စည်းအမြန်ဆုံး ရောက်ရှိရန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေစေရန် အစိုးရဌာနများကို လာဘ်ထိုးနေသည့် ကုန်ကျစရိတ်များမှာ ရောင်းချမည့် ကုန်ပစ္စည်းပေါ် ထပ်တိုး ဈေးတင်လိုက်သည့်အတွက် အမှန်တကယ် နစ်နာသူမှာ ပြည်သူလူထုသာ ဖြစ်သည်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုကို အခြေခံ ပြည်သူများ ခံစားကြရပြီး နိုင်ငံတော် အတွက်လည်း ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ ဆုံးရှုံးကာ မသမာသော ဝန်ထမ်းများထံသို့ အကျိုးအမြတ်များ ရောက်ရှိသွားသည်။
အကြီးတန်း အရာရှိအချို့၏ အတောမသတ်နိုင်သော လောဘနှင့် ဝင်ငွေနိမ့် ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းချက်များအပေါ် နိုင်ငံအကြီးအကဲ၏ ပြောစကား မည်မျှထိရောက်မှု ရှိမည်ကိုမူ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရမည်ပေဦးမည်။
ယခုအထိ အကောက်ခွန် လောကအတွင်း အသုံးများဆုံး စကားတစ်ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်း။ “ပေးတယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း အဆင်ပြေပြေ ပြီးသွားအောင် ပေးကြတာပဲ။ ဒါက အပြန်အလှန်ပါပဲ၊ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေပါပြီ”
ဆန်ခိုးမမိ ဖွဲခိုးမိနှင့် သန်း ၆၀အတွက် ပြက်လုံးဟောင်းများ - ဇော်သက်ထွေး
သောကြာနေ့က ထုတ်ဝေတဲ့ အစိုးရ သတင်းစာနဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေမှာ နိုင်ငံရေး သတင်းတွေနဲ့ အင်မတန်မှ ဝေေ၀ဆာဆာ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူအများဆုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းကတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်တဲ့ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်ကို ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်တာတွေ၊ ထူးခြားမှု တစ်ခုအဖြစ် သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ဌာနပိုင် ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ခန့် အလွဲသုံးစားပြုမှုဖြင့် အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဌာန (စစစ)က ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်၊ ဘုရားကုန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှာ (ပ) ၂၁/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၄၀၉/၁၀၉အရ အမှုဖွင့် အရေးယူလိုက်တာကိုတော့ အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု ဥပဒေ ပေါ်ထွက်လာရင် လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာတစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်မယ်လို့ ပြန်ကြားရေးက ကြွေးကြော် ထားတဲ့ ကြေးမုံနဲ့ မြန်မာ့အလင်းမှာတော့ ဖော်ပြမထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သာသနာရေး ၀န်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ဟာ ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလကနေ ဒီဇင်ဘာလအထိ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ စည်းကမ်းချက်မှာ မပါရှိတဲ့ လယ်ဝေးမြို့က ရက်ကန်းစင်တောင် ကျေးရွာမှာ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ အောင်တော်မူ စေတီတော်ကို မိသားစု အလှူတစ်ရပ် အဖြစ် ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်ရာမှာ ဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ် ၀န်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဌာနပိုင် ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ စက်သုံးဆီ အပါအ၀င် ငွေကျပ် ၃၃သိန်းကျော်ကို ကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲ ခဲ့ပြီးမှ နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့တွင် ဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့ခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စေတီတော် ထီးတင်ပွဲတွင် ဌာနပိုင် ဘဏ္ဍာငွေကျပ် သိန်း၁၀၀ ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ရာ ယင်းငွေများ အနက် ငွေကျပ် ၂၈ သိန်းကျော်ကို နောက်ရက်တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့ပြီး ယာယီ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ ကျန်ငွေ ၇၂သိန်းကျော်ကို မိသားစု အနေဖြင့် လှူဒါန်းကာ ကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲခဲ့ပြီးနောက် ၀န်ကြီးဌာန ငွေစာရင်းတွင် မမှန်မကန် စာရင်းပြခဲ့ခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သောကြောင့် (စစစ)က တရားလို ပြုလုပ် တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အူတက်မတက် ချက်မတက် ရီခဲ့ကြရပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့ဝင်တွေကို သဘောထား အမြင်မတူလို့ အပြတ်ရှင်းချင်ရင် အရင် မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းကစလို့ (န၀တ) အလယ် (နအဖ)အဆုံး ဒီပုံဒီအချိုး အတိုင်း လုပ်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
အတိတ်သမိုင်းကို ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် အခု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီး လုပ်နေတဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးကို ရှင်းချင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး ရဲ့သားလေး နိုင်ငံခြား ဆေးသွားကုရာမှာ အပြန်ကို အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လာတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲ ထောင်ချခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အရင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဟောင်း၊ ထောက်လှမ်းရေးမှူးဟောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဗိုလ်နီကို မျက်မှန်တင်ဦးက ရှင်းချင်တော့ ဂျပန်ကနေ ကာစီယို အော်ဂင်တစ်လုံး တင်သွင်းလာတယ်ဆိုပြီး အင်းစိန် ထောင်ထဲကို ပို့ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာလည်း ထောင်ထဲပို့ချင်တော့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးအဆင့် လုပ်ခဲ့တဲ့ သူကိုတောင် လိုင်စင်မဲ့ကား ရှိတယ်ဆိုပြီး အင်းစိန်တောရကို ပို့ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ သွားနေပြီး အရင်ကထက် ပွင့်လင်းမြင်သာပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲက သန်း၆၀သော ပြည်သူအတွက် မထူးခြားတဲ့ ရိုးအီနေတဲ့ ပြက်လုံးဟောင်း တစ်ခုပါပဲ။ သာသနာရေး ၀န်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သန္တိသုခ ကျောင်းတော် အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းတယ်ဆိုရင်လည်း တခြား အကြောင်းပြချက်နဲ့ အရေးယူဖို့ရာ မသင့်တော်ပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့က ကိုယ်ယုံကြည်လို့ ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ကြီး တစ်ယောက်ကို ပြစ်ဒဏ် ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အရပ် လေးမျက်နှာက နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့၊ ပြီးတော့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အရေးယူဖို့ သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ အရင် ကစားကွက်အတိုင်း ပွဲထွက်လာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အထင်သေးမိပါတယ်။
သာသနာရေး ၀န်ကြီးကို တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့ ကိစ္စကြောင့် ဘယ်ပြည်သူကမှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲ မနေပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ့ဝန်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ကို ၂၅နှစ်တိုင်တိုင် မတရား အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ယန္တရားတစ်ခုရဲ့ မူလီတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖမ်းဆီးတဲ့ အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထောက်ချင့်သင့်တာပေါ့ ခင်ဗျာ။
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ပါမောက္ခ ဒေါ်ကျင်ဌေးတို့ရဲ့ တရားကိစ္စမှာ ဒေါ်ကျင်ဌေးကို အနိုင်ပေး လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ပညာရေး ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့် နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးဆန်းဆင့်နဲ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုလည်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ခန့်မှန်းသူ အချို့က သမ္မတသက်တမ်း သိပ်မကျန်တော့တဲ့အတွက် အစိုးရ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲတွေ ကြီးကြီးမားမား မရှိနိုင်ဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့အချိန်မှာ အခုဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (န၀တ)ခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်တစ်လုံးဟာ ငှားစားရင်တောင် သိန်း၈၀၀လောက်ရတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တစ်ယောက်ကတော့ ၇၂သိန်း အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ အခုဆိုရင် အပြစ်ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်း ခံနေရပါပြီ။ အပြစ်မရှိလို့ လွတ်လာရင်တောင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဂုဏ်သိက္ခာအရ အထိနာသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဒီအကြောင်းပြချက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လတ်တလော မြင်သာထင်သာ ရှိနေတဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ အစိုးရ အဖွဲ့ထဲမှာရော လွှတ်တော်ထဲမှာပါ သူများ မကောင်းကြောင်း၊ ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းတွေ ရေးသားဖို့ ငွေတွေ ပုံအောပြီး ကိုယ်ပိုင် မီဒီယာတွေ တိတ်တခိုး ထောင်နေတာကတော့ သိသာလှပါတယ်။ အဲဒီ့မီဒီယာတွေက သတ္တိတွေ တွင်တွင်ပြ၊ ဒီမိုကရေစီ စကားလုံး တွင်တွင်သုံးပြီး အစိုးရရော ဘာရော နားမလည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး/ငယ်မရှိ၊ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် နတ္ထိနဲ့ မီဒီယာ နယ်ပယ်မှာ လူစွာလာလုပ်နေတာ အားလုံးမြင်နေရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ၁၅ နှစ်၊ နှစ်၂၀ နေခဲ့ရတဲ့ သူတွေတောင် အဲဒီ့မီဒီယာတွေကို အခုကြောက်နေရတယ်ဆိုပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆန်ခိုးမမိ ဖွဲခိုးတော့ မိသွားပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် နေရာကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်းကို ခန့်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ထွက်ပေါ် လာပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီး နေရာကို လက်ရှိ သာသနာရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ယခင်သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်း လာမယ်လို့လည်း ကြားနေရပါတယ်။ ဒီသတင်း ကျတော့လည်း အူတက်အောင် ရီရတာပါပဲ။ ဦးစိုးဝင်း စာနယ်ဇင်းကို ကိုင်ခဲ့တုန်းက သူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လက ကျပ်သိန်းပေါင်း ၈၀၀၀ကျော် ကွာဟခဲ့လို့ ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့ကြတာ နီးစပ်တဲ့သူတွေ သိပါတယ်။ မြန်မာ့အလင်း မန်နေဂျာက အပြစ်အားလုံးကို တစ်ဦးတည်း ရင်းသွားလို့ ဒီသတင်းဟာ ပြည်သူတွေ မသိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကဆိုရင် ဘယ်အစိုးရ လက်ထက်မှာမှ မကြားဖူးတဲ့ ရာထူးကို လက်ဖွဲ့တာတွေတောင် အဲဒီ့ဌာနမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကြောင်းတွေကြောင့် သာသနာရေး လောက အတွက်လည်း ရင်လေးရပါတယ်။ နောင်ကျမှ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ လက်ဖွဲ့မယ် ဆိုရင် ပွဲတွေပျက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ချုပ်ပြီးပြောရရင် စိတ်ကူးစိတ်သန်း ချို့တဲ့နေတဲ့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ကွက်တွေကလည်း အရင်ကအတိုင်းပဲ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းက ခေါင်းပါး၊ လူပြက်စကားနဲ့ ပြောရရင် အောက်လုံးတွေပြက်၊ ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရင် အနီကဒ်တွေ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ ဒေါ်လာသန်းချီ ချမ်းသာနေတဲ့ အစိုးရပိုင်းမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို သာသနာရေးဝန်ကြီး ဖြစ်ရပ်က ရီစရာ ပြက်လုံးတစ်ခု ထုတ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုကတော့ ဆင်းရဲ မွဲတေမြဲ။
ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုက ကြီးမားနေဆဲ။
“ကြောက်လို့ သေတော့မယ်”ဟူသော စကားကို သိပ္ပံနည်းအရ လက်တွေ့ သက်သေပြနိုင်
အလွန်အမင်း ထိတ်လန့်စရာ ကြုံရသည့်အခါ “ကြောက်လို့ သေတော့မယ်”ဆိုတာမျိုး ပြောတတ် ကြသည်။ ထိုစကား အတိုင်းပင် ကြောက်စရာ၊ ထိတ်လန့်စရာ၊ စိတ်ဖိစီးစရာများ နဲ့ ကြုံရခြင်းသည် အသက်ကို တကယ် တိုစေကြောင်း သိပ္ပံပညာ အရလည်း သက်သေ ထုတ်ပြနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုအသစ် တစ်ရပ်အရ လူကို ကြောက်စေ စိတ်ဖိစီးစေသည့် ဟိုမုန်း များများ ထွက်လေ သွေးတွင်းသို့ ဘက်တီးရီးယားများ ပို ရောက်လာလေ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများသည် သွေးလွှတ် ကြောနံရံ များတွင် ကပ်တွယ် နေတတ်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးစေ ကြောက်စေသည့် ဟိုမုန်းများ ရုတ်တရက် ထွက်လာသည့် အခါ ထိုဟိုမုန်းများ၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဘက်တီးရီးယား များ နံရံမှ ကွာကျကာ သွေးကြော အတွင်းသို့ အစုအပြုံလိုက် ၀င်ရောက် မျောပါ သွားကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိ ထားသည်။ ထိုအခါ သွေးကြော ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး နှလုံးကို ဒဏ်ဖြစ်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွား လာရတော့သည်။
လေ့လာမှု စစ်တမ်းကို အမေရိကန် အဏုဇီဝ ဗေဒအသင်းကြီးက ထုတ်ဝေသည့် mBio ဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
““ဗြုန်းစားကြီး ထိတ်လန့် သွားတာမျိုး၊ ကြီးကြီးမားမား စိတ်ဖိစီးတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ကတီချို လမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ သွေးကြောနဲ့ တစ်သျှူးတွေထဲ အများကြီး ၀င်တယ်။ ဟိုမုန်းတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှု ကြောင့် သွေးလွှတ်ကြော နံရံတွေမှာ ကပ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဟာ အစုအပြုံလိုက် ကွာကျပြီး သွေးစီးကြောင်းထဲ မျောပါပြီး တစ်နေရာရာမှ တစ်ဆို့သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်””ဟု လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သော နယူးယောက်မြို့ ဘင်ဟမ်တန် တက္ကသိုလ်မှ ဒေးဗစ်ဒေဗီက ပြောသည်။
မုန်တိုင်း၊ ငလျင်စသည့် သဘာဝ ဘေးကြီးများ ကြုံရသည့် အခါတွင် လည်းကောင်း၊ ယာဉ်တိုက်မှု ကြုံရသည့်အခါ၊ ချစ်ခင်ရသူ တစ်ယောက်ယောက် သေဆုံးသည့် အခါတွင် လည်းကောင်း နှလုံးဖောက်ပြန် တတ်ခြင်းမှာလည်း အလားတူ သဘောဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အလွန်အမင်း ကြောက်စရာ စိတ်ဖိစီးစရာ ကြုံလာရသည့်အခါ နှလုံးကြွက်သားများသည် ပုံမှန်ထက်ပို၍ အလွန်အမင်း ပွဖောင်း တက်လာသည်။ ထိုအခါ ကြွက်သားများ၏ ကျစ်လျစ်သော ညှစ်အားဖြင့် အလုပ်လုပ်သော နှလုံးသည် ပွဖောင်းကာ ညှစ်အားလျော့ပြီး ပုံမမှန်ဖြစ်ကာ နှလုံးဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဓာတ်ပုံများ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနောက်ပိုင်း သက္ကောဂုဏ် နှင့်ပြည့်စုံသူ ခေါင်းဆောင် မရှိခဲ့ဟု ရွှေည၀ါ ဆရာတော်မိန့်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နောက်ပိုင်း မေတ္တာသုတ်ပါ သက္ကောဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသူ
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မျှ မရှိခဲ့ကြောင်း ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟက ဇွန်လ
(၂၈) ရက်နေ့က Sule Shangri La Hotel တွင် ပြုလုပ်သော မေတ္တာ အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် မိန့်ကြား သည်။
မေတ္တာသုတ်တွင် ပါသော သက္ကောဂုဏ်ဆိုသည်မှာ အစွမ်းအစရှိသူ၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်သူ၊ မေတ္တာတရားနှင့် ပြည့်စုံသူကို ဆိုလိုကြောင်း ရွှေည၀ါ ဆရာတော် က မိန့် ကြားသည်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဝေဖန် စရာရှိရင် အားနာစရာ မလိုဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နောက်မှာ သက္ကောဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သူက ကိုယ်တော် တစ်ပါးတည်း အမြင်အရ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်တတ်တယ်။
မီးရှူး တန်ဆောင် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်၊ လုပ်တ အတိုင်းလည်းပြောတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သက္ကောဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတယ် ဟု ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က မိန့် ကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ချစ်မြတ်နိုးထိုက်၊ လေးစားထိုက်သော မမေ့အပ်သော ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က တိုင်းပြည် ကျွန်ဖြစ် ရခြင်းသည်လည်း ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအားလုံး ညံ့၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်ဘုရင် တစ်ပါးတည်းအား အပြစ်တင်၍ မရကြောင်း၊ ကနောင် မင်းသားကြီးသည် ခေတ်မှီ လက်နက် များ တီထွင်ခဲ့ သော်လည်း မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကြောင့် လေးခွကိုပြန်၍ ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်သည်။
အနာဂတ် တွင် သက္ကောဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်ကို ခန့်မှန်းရန်စော သေးကြောင်းလည်း ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က ဆက်လက် မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ အစိုးရ ၀န်ကြီးတချို့၏ ပြောစကားများသည် ပြည်သူသို့ ပြောရာတွင် မယဉ်ကျေးသောကြောင့် ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းများ ပြန်သင်ရန် လိုကြောင်းလည်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဒီနေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ ပြဿနာ အဟောင်းတွေပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတဲ့ အခါ ဖြစ်လာတဲ့ ဟာတွေပါ၊ ဒီပြဿနာ တွေကို ပြဿနာပါလို့ ဘယ်သူမှ ၀န်မခံခဲ့ကြဘဲ မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာဆိုဘာမှ မဖြစ်သယောင် အားလုံး မျက်စိ စုံမှိတ်ခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့ ငြင်းမရတော့ပါဘူး ဟု စာရေးဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း)က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ် ကျော်သော ကာလ၌ စစ်အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကာ ပြည်သူများသည် အကြောက်တရားနှင့် သာ ရပ်တည်ခဲ့ကြရကြောင်း မေတ္တာအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သူများက ဆိုသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ထွန်းကားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင်ရင်း၊ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူများက ပြည်သူအပေါ် ကြင်နာရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကို ကုစားဖို့ အာဟာရပြည့် စူပါငှက်ပျောသီး စမ်းသပ်လျက်ရှိ
အထူးအာဟာရ ပြည့်ဝအောင် မျိုးဗီဇပြုပြင် ထားသော စူပါငှက်ပျောသီးကို လူသားများနှင့် စတင် စမ်းသပ်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း သြစတြေးလျ သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် လည်းကောင်း စမ်းသပ် အောင်မြင်ထားပြီ ဖြစ်ရာ နောက်ဆုံး အဆင့် လူသားများဖြင့် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ပါက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အာဟာရချို့တဲ့သော ဒေသများတွင် စူပါငှက်ပျောသီးများက လိုအပ်သော အာဟာရများ ဖြည့်စွမ်း ပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
လူသားများအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ဗီတာမင် အေဓာတ်ကို စူပါငှက်ပျောသီးက ဖြည့်စွမ်း ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ လူသားများဖြင့် လက်တွေ့ စမ်းသပ် သွားမည် ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုများ အောင်မြင်ပါက ၂၀၂၀ တွင် အာဖရိကတိုက် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ၌ စတင် စိုက်ပျိုးကာ လူတိုင်း အလွယ်တကူ စားနိုင်သော ငှက်ပျောသီးအဖြစ် ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။ အာဟာရချို့တဲ့သူ အများဆုံးရှိသော အာဖရိကတွင် လူတိုင်း စားနေသော ငှက်ပျောသီးကို အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲ ပေးခြင်းဖြင့် အာဖရိက အာဟာရ ချို့တဲ့မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဟု ပညာရှင်များက ယုံကြည်ထားသည်။
““ကောင်းမွန်တဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ ကို ဖော်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ အာဖရိကမှာ လူတိုင်းအတွက် နေ့စဉ် အစား အစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးကို လူတွေအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပါဝင်နေအောင် ဖန်တီး ပေးလိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်””ဟု အာဟာရပြည့် စူပါငှက်ပျောသီး စီမံကိန်း ခေါင်းဆောင် ပါမောက္ခဂျိမ်းဒေးက ပြောသည်။
စီမံကိန်းကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံကွင်းစ်လန်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် (QUT) မှ ပညာရှင်များ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဘီလ်ဂိတ်မောင်နှံ ထူထောင်ထားသော ဘီလ်နှင့် မလင်ဒါဂိတ် ဖောင်ဒေးရှင်းက ရန်ပုံငွေ စိုက်ထုတ် ပေးထားသည်။ လူသားများနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အတိအကျ သိနိုင်မည်ဟု အဖွဲ့ကပြောသည်။
ယူဂန်ဒါမှ ငှက်ပျောသီးမျိုးကို စံပြထား၍ QUT ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် မျိုးဗီဇ ပြုပြင် စမ်းသပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယူဂန်ဒါ အပါအ၀င် အာဖရိက အရှေ့ပိုင်း ဒေသများတွင် ငှက်ပျောသီးကို နေ့စဉ် အစားအစာအဖြစ် စားသုံးနေသည့်တိုင် ငှက်ပျောသီးမျိုး စိတ်များသည် ဗီတာမင်အေ၊ သံဓာတ်စသည့် လူသားအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ ချို့တဲ့လျက် ရှိသောကြောင့် စားပြီး အားမဖြစ်သည့် အနေအထား ဖြစ်နေသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် အာဟာရ ပြည့်ဝသော စူပါ ငှက်ပျောသီး မျိုးစိတ်ကို ဖန်တီးကာ လက်ရှိငှက်ပျောများ နေရာတွင် အစားထိုး စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အာဖရိကသားများ ပုံမှန်အတိုင်း ငှက်ပျောသီး စားနေရုံဖြင့်ပင် အာဟာရ ပြည့်ဝလာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တစ်နှစ်ကို ကလေးခြောက်သိန်းခွဲ မှ ခုနစ်သိန်းနီးပါး သေဆုံးနေရသလို သုံးသိန်းခန့်သည် လည်း မျက်စိအလင်းကွယ် ပျောက်နေရကြောင်း ပါမောက္ခဒေးက ပြောသည်။
စူပါ ငှက်ပျောသီးသည် အပြင်ပန်းတွင် ရိုးရိုး ငှက်ပျောသီးများ အတိုင်းသာ ဖြစ်သည်။ အတွင်းသားမူကား ရိုးရိုး ငှက်ပျောသီး အရောင်ထက် ပိုရင့်ပြီး လိမ္မော်ရောင်သန်းကြောင်း သိရသည်။
စူပါ ငှက်ပျောသီးကို မျိုးဗီဇ ပြုပြင် ဖော်စပ်ခြင်း အောင်မြင်ပြီးစီးပါက ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင် စတင်စိုက်ပျိုးမည် ဖြစ်ပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ချဲ့ထွင်ကာ ရ၀မ်ဒါ၊ ကွန်ဂို ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကင်ညာ၊ တန်ဇေးနီးယား စသည့် နိုင်ငံများတွင်လည်း စိုက်ပျိုးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်မသည် အငြိမ်းစားပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ အငြိမ်းစားမယူခင်က တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရသည့် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒဌာနသို့ အိမ်မှကားမအားလျှင် ‘Taxi’ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လိုင်းကားဖြင့်လည်းကောင်း နေထိုင်ရာဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မှ ၈ မိုင်၊ ၈ မိုင်မှ အဆင်ပြေသည့်ကားဖြင့် သွားရပါသည်။ ကျွန်မလိုင်းကားစီးသည့်အခါတိုင်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့်သူများကို နေရာဖယ်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ တစ်နေ့တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အဖော်များတက်လာ၍ ကျွန်မနေရာဖယ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထမင်းဘူး၊ ရေဘူး၊ စာအုပ်များပါသည့်ခြင်းကို ဘေးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ယူထားပေးပါသည်။
ကျွန်မဆင်းမည့်မှတ်တိုင် အများကြီးလိုပါသေးသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသည့် မပေါ့မပါးကလေးမ ကလေးကို နေရာဖယ်ပေးရ၍ ကျွန်မများစွာ ဝမ်းသာနေမိပါသည်။ နှစ်မှတ်တိုင်ကျော်တွင် နေရာဖယ် ပေးထားသော ကလေးမကလေး၏ ဘေးတွင်ခရီးသည်ဆင်းသွား၍ ကျွန်မလည်း ခြင်းကိုလှမ်းယူကာ ထိုင်မည်ဟုစဉ်းစားနေမိပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးမကလေးသည် အနည်းငယ်လှမ်းသောနေ ရာတွင် ရောက်နေသည့် သူ့အဖော်ကို အတင်းလှမ်းခေါ်ပြီး လွတ်သွားသောနေရာ၌ ထိုင်စေပါသည်။ ဘေးကလူများက တအံ့တသြကြည့်နေကြတာ သူမမှုပါ။ နေရာဖယ်ပေးလိုက်တာက ‘ကျွန်မ’၊ ယခုနေ ရာလွတ်သွား၍ ထိုင်နေသူက ဒီကလေးမကလေးရဲ့ ‘အဖော်’။
သြော်-လောကကြီးထဲက လူတွေရဲ့ . . . . စိတ်ဓာတ်ပါလား။ ကျွန်မနေရာဖယ်ပေးမိတာ ‘နောင်တ’ မရပါ။ ‘ကုသိုလ်’ စိတ်ပဲလေ။ သူ့စိတ်နဲ့သူ၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ ကျွန်မ ‘အကုသိုလ်’ စိတ်မဖြစ်လို တော့ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်အတိတ်ကာလကလည်း ကျွန်မခုလိုကြုံခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်မအမျိုးသားသည် အထူးကုဆရာ ဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်ဆေးခန်းဖွင့်ထားပါသည်။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲမှ သူများ၊ ရဟန်းသံဃာတော် များ၊ သီလရှင်များကို ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသပေးသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့အိမ်ပြောင်း၍ရပ်ကွက်အသစ်သို့ ရောက်လာသောအခါ ပထမရပ်ကွက်မှ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး လာရောက်ပါသည်။ ကျွန်မသည် မီးဖိုထဲမှာ ထမင်းဟင်းချက်ရင်း သမီးကြီးကို “သမီးရေ၊ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေက အရင်ရပ်ကွက်ကနော်၊ ဖေဖေကြီး မမှတ်မိမှာစိုးလို့ သွားပြောလိုက်အုံး” ဟု ကျွန်မပြောလိုက်၍ ဆေးဖိုးရော ကုသစရိတ်ပါ မယူလိုက်ပါ။
နောက်နေ့ ကျွန်မဈေးထဲတွင် ထိုအမျိုးသမီးများဖွင့်ထားသည့် ထန်းလျက်ဆိုင်သို့ သွားဝယ်ပါသည်။ ယခင်ကလည်း အားပေးချင်သည့်စိတ်ဖြင့် ကျွန်မအမြဲဝယ်နေကြပါ။ ထိုအမျိုးသမီးက “ဆရာမရေ၊ ထန်းလျက်တွေဈေးတက်သွားပြီ၊ အရင်ဈေးနဲ့ မရတော့ဘူးနော်” ကျွန်မသူတို့ဆိုင်မှာ တစ်ခါမှဈေးမ ဆစ်ခဲ့ဘူးပါ။ ကျွန်မလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲ ပိုက်ဆံပေးပြီး ထွက်လာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်မသာဈေးရောင်းသူဖြစ်ပါက ကိုယ့်ကိုစေတနာဖြင့် ကုသပေးလိုက်သည့် မေတ္တာတွေကို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်မိမှာပါ။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးနေပါသည်။ ဆေးကုပေးလိုက်တာက ကုသိုလ်စိတ်၊ နောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေက အကုသိုလ်စိတ်တွေပါလား။ ကိုယ်ပေးနိုင်တာပေးပြီး ဘာမှပြန်မလိုချင်ဘဲ အရာရာကိုစွန်လွှတ်နိုင်ရပါမယ်။ ကိုယ်ပထမကုသိုလ်စိတ်ပဲ အစွန်းအထင်းမဖြစ် စေလိုဘဲ ဆက်လက်ပီတိဖြစ်နေရာမှာပါ။ ကိုယ်သေရင် ကိုယ့်နောက်ကိုကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေသာ ပါသွားမှာပါ။ အားလုံးကိုစွန့်ခဲ့ရမှာပဲ ဘာပဲလုပ်လုပ် အတတ်နိုင်ဆုံး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသာ စံနမူနာ ယူပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။
“ဘုရားမို့လို့ စွန့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ စွန့်နိုင်လို့ဘုရားဖြစ်သွားတာ။ မြတ်စွာဘုရားကို တကယ်ကြည်ညို တယ်ဆိုရင် သူခင်းတဲ့လမ်းအတိုင်း တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီး လျှောက်ရမှာပေါ့” ဟု လမ်းညွှန်မိန့်ကြား ခဲ့သောသန်လျင်သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မစိတ်ကိုကျွန်မ ‘ကုသိုလ် စိတ်’ ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက နှစ်သက်ခဲ့ရသော ကဗျာဆရာကြီး ‘တိုးဝေ’ ၏ ‘စိတ်ဓာတ်’ ကဗျာကို မျှဝေပေး ပါရစေ။
စိတ်ဓာတ် ယိမ်းယိုင်သွားရင်ဖြင့် မိတ်ကပ်မလိမ်းနိုင်ပါ
တကား . . . ။
ဤဆောင်းပါးဖြင့် ကဗျာဆရာကြီး ‘တိုးဝေ’ အား ဂါရဝပြု၏။
ဇွန် (၁၅) ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မိသားစုကိုဆန့်ကျင်၍ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သော ပါကစ္စတန်စုံတွဲကို မိန်းကလေးဘက်က လည်လှီးသတ်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အစ္စ လာမ်မာဘတ်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၀၀ အကွာရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာတွင်
မိသားစုကို ဆန့်ကျင် ၍ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သောလူငယ် စုံတွဲ တစ်တွဲကို မိန်းကလေးရှင်
မိသားစုက လည်လှီးသတ်ခဲ့သည် ဟု ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဇွန်လ ၂၈ ရက်တွင် ပြောသည်။
အသက် (၁၇) နှစ်အရွယ် မာဖီယာဘီဘီနှင့် အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် မူဟာမက်ဆာဂျစ်တို့ သည် မိသားစုသဘောမတူသည့် ကြားမှ ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် လက် ထပ်ခဲ့ကြသည်။
ဘီဘီ၏ မိဘ နှစ်ပါးသည် ဇွန်လ ၂၆ ရက် ညတွင် ဘီဘီတို့ ဇနီးမောင်နှံအား အိမ်သို့ပြန်လာ ရန် သွေးဆောင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး နောက် အိမ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို ကြိုးတုပ်၍ ဘီဘီ၏ ဖခင်က လည်လှီးခဲ့ကြောင်း ပါ ကစ္စတန် ရဲအရာရှိ ရာနာဇာရှစ် က ပြောသည်။
ဘီဘီ၏ မိဘများနှင့် ဆွေ မျိုးများက သမီးဖြစ်သူ ဘီဘီ ကြောင့် အရှက်ရပြီး ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ဘီဘီတို့ ဇနီးမောင်နှံကို သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ သည်ဟု ရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ် သော ဂိုဟာနာဖီးစ်က ပြောသည်။
ဘီဘီ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ ယခင်က အိမ်ထောင်ကျဖူးသူဖြစ် ၍ ဆွေမျိုးများက မင်္ဂလာပွဲကို သဘောမတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နာဖီးလ်က ပြောသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ဒေသ များစွာတွင် ဣနြေ္ဒမဲ့ အပြုအမူ ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသမီးအား သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းအရ လက်ခံကြသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် မိသား စု၏ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်သော အ မျိုးသမီးသည် မိသားစုအပေါ် စော်ကားသူဟု မှတ်ယူခံရပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာအ တွက် သတ်ဖြတ်ခံရသော ပါကစ္စ တန်အမျိုးသမီး ၈၆၉ ဦးရှိသည် ဟု မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ပါကစ္စတန်လူ့အခွင့်အရေး ကော် မရှင်အဖွဲ့က ပြောသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် လူ သတ်သူသည် ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင် ပင် မိသားစုဝင်များက ယင်းလူ သတ်သမားကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည် ဟု ပါကစ္စတန်ဥပဒေက အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း မိ သားစုက သဘောမတူသည့်လူ ဖြင့် လက်ထပ်ခဲ့သော ကိုယ်ဝန် ဆောင်အမျိုးသမီးကို မိန်းကလေး ရှင်မိသားစုက အုတ်ခဲများဖြင့် အ သေထုသတ်ခဲ့ကြသည်။
ထူးထူးခြားခြား လူအများအံဩအောင် ရေကူးကန်ရေပေါ် လမ်းလျှောက်ပြတဲ့ မျက်လှည့်ဆရာ (video)
ရေကူးကန်ထဲမှာ လူတွေ ရေကူးလို့ ကောင်းနေတဲ့ အချိန်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ လူတစ်ယောက်က ဘာမပြော၊ ညာမပြောနဲ့ ရေကူးကန်ကို ကန့်လန့် ဖြတ်လျှောက်ပြ သွားတာပါ။
မိုးရာသီ လိုင်းကားများ မိုးလုံအောင်ပြင်ဆင်ပေးပါ (အယ်ဒီတာထံပေးစာ)
ကျွန်မက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအလုပ်က နေ့စဉ် အပြင်ထွက်ပြီး သွားလာနေရတဲ့အ လုပ်ပါ။ ဒီလိုမိုးရာသီဆိုရင် အပြင်ထွက် သွား လာနေရ တဲ့သူတွေအတွက် အရမ်း ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိုးမမိအောင် ဂရုစိုက်ရတာက တစ်မျိုး ပါလာတဲ့အလုပ်ကိစ္စ စာရွက်စာတမ်း တွေနဲ့ ဖုန်းကို ရေမစိုအောင် ဂရုစိုက်ရတာက တစ်မျိုး၊ အမျိုးမျိုးသတိထားရ ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ထီးမမေ့အောင် လည်း အမြဲဆောင်သွားရပါတယ်။ အရင် ရာသီတွေတုန်းကလို ကား လည်း ရွေး မစီး နိုင်တော့ပါဘူး။ မိုးရိပ်တွေမည်းလာပြီ လေအေးအေးတွေ တိုက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ လာတဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်ပြေးတက်ရပါတယ်။
ပြဿနာက အဲဒီမှာစ တာပါ။ မိုးလုံချင် လို့ ကားပေါ်ပြေး တက်ကာမှ ကားမှန်ပြတင်းမှာ မှန်က ပါတဲ့နေရာပါပြီး မပါတဲ့နေရာမပါပါ ဘူး။ ဒီကြားထဲ လူကကျပ်၊ ကားလမ်း ကပိတ်နဲ့ ပိုပြီး စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ များ သောအားဖြင့် မထသယာဉ် လိုင်းတွေ မှာဆိုရင် တချို့ဘတ်စ်တွေ၊ မီနီဘတ်စ် တွေမှာ မှန်ကွဲနေတာတွေကိုလည်း ပြန် ပြောင်း မတပ်ကြပါဘူး။ မိုးမလုံ တဲ့အ ပြင် ပြတင်း ပေါက်နားမှာလည်း ထိုင်ရမှာခပ်လန့်လန့်ပါ။ မထသ က ယာဉ် တွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့် စုံမှုကို အမြဲစစ်ဆေးတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဒါဆိုရင် တာဝန်ရှိသူတွေက မမြင်တာပဲလား။
မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်တာပဲလား မသိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ စပါယ်ယာ အအော် အငေါက်ခံပြီး စီးရတဲ့ ဘတ်စ်ကားမှာ တော့ မိုးရေလုံလုံနဲ့ စီးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကို မထသတာဝန်ရှိသူတွေအနေ နဲ့ ဆောင် ရွက်ပေး စေချင်ပါတယ်။
ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ထိပ်မှာ နာရီလက်တံပြောင်းပြန်သွားတဲ့ နာရီ
ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ လက်ဝဲယိမ်းအစိုးရ အာဏာရ အုပ်ချုပ်နေတာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေဖို့
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားရပ်တွေ မှာ တရုတ်ဖက် မြန်မာရပ်မည်ဟု ဦးသိန်းစိန်ပြော
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ၃ ရက်ကြာ ခရီးရောက်ရှိနေပြီး ဒီကနေ့မှာ တရုတ်မြန်မာအိန္ဒိယ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူ ၅ ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆၀ ပြည့် အထိမ်း အမှတ်ပွဲတွေကို တက်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့တော်ကို မနေ့က ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ၂ နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးမြင့်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ တရုတ်အစိုးရထုတ် တရုတ်ပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်း မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စဉ်ဆက် မပြတ် ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အဓိကအကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်တွေမှာ တရုတ်ဖက်က ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ မူဝါဒတွေ ဆက်ပြီးထားရှိမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးတွေ တိုးမြင့်စေလွှတ်ဖို့၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံဖလှယ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ နယ်စပ်မှုခင်းတွေ အတူတကွ တိုက်ဖျက်ဖို့ စတာတွေကို တရုတ်သမ္မတက အဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်က မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ အိမ်နီးချင်း ၃ နိုင်ငံအကြားနယ်မြေနဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်မှုကို အပြန်အလှန်လေးစားရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး မူကြီး ၅ ချက်ကို ပူးတွဲ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့ မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဒီနေ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ တန့်ဆည်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ထွန်းက ဆန္ဒပြရတဲ့ အကြောင်း RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ်ဆိုရင် ပုဒ်မ ၄၃၆ မပြင်ရင် မရဘူးလို့ ကျနော်တို့ ခံယူထားပါတယ်၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်မှသာလျှင် တခြားဥပဒေပုဒ်မတွေကို ပြင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီ ၄၃၆ ကိုပြင်ဖို့ လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီနဲ့ မညီတဲ့အတွက် တန့်ဆည်မြို့နယ် လူထုကလည်း ပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာတွေသိစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် ကလည်း လူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုလာရန်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ် ပါတယ်"
ဆန္ဒပြပွဲကို တန့်ဆည်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီး တန့်ဆည်မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ ကျော်က ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေ ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
တန့်ဆည်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကနေ ရေဦး၊ ကလေးဝ လမ်းမတစ်လျှောက်ကနေ တန့်ဆည် မြို့တော်ခန်းမရှေ့အထိ လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေဦး၊ ကန့်ဘလူ၊ ခင်ဦး၊ ဒီပဲယင်းစတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာလည်း ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျင်းပချိန် တစ်လအတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကို ပိုပြီးဆန်းသစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဆံသဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ
Lord of the Rings ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင် Gollum နဲ့တူတဲ့ ထူးဆန်းသဏ္ဍန်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါကို တရုတ်ပြည်တောင်ကုန်းတွေကြားမှာတွေ့ရှိ
တရုတ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ်ဦးက Lord of the Rings ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင် Gollum ရုပ်နဲ့တူတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ဟာ ဘေဂျင်းမြို့ မြောက်ဘက် Huairou အရပ်ကကျောက်ဆောင်တွေကြားထဲ ခိုအောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့အရာကို သက်သေပြဖို့အတွက်လည်း သူကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြပါတယ်။
‘ကျွန်တော်အပေါ့သွားဖို့ သွားတဲ့အချိန်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကိုတွေ့တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အခု ကြောက်လန့်နေတယ်’ လို့အဆိုပါတွေ့ရှိခဲ့သူဆိုပါတယ်။
အင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဒီဓာတ်ပုံကို မြင်လိုက်ရတဲ့သူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းရေးခဲ့ပါတယ်။
‘ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်တုန်းက ကျွန်တော်/ကျွန်မနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်ကားငယ်တစ်ကားရိုက်ကူးဖို့ တောင်ကြားတွေထဲကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်/ကျွန်မ အပေါ့သွားနေတုန်းမှာ လူတစ်ယောက်ယောက်လာပြီး ကျွန်တော်/ကျွန်မ ကိုဓာတ်ပုံရိုက်သွားပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်’ ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လေထက်ပေါ့ပြီး ပိုပေါ့သော်လည်း ပိုမာတဲ့ ပစ္စည်းရုပ်ဝတ္တုကို တွေ့ရှိ
မကြာသေးတဲ့ ရက်အနည်းငယ်မှပဲ US မက်ဆချုဆက်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ နည်းပညာကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ အမျိုးသားလုံးခြုံရေး ဓာတ်ခွဲခန်းမှ သုတေသနပညာရှင်တို့ရဲ့အောင်မြင်စွာရရှိလာတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ရုပ်ဝတ္တု ပစ္စည်းမှာ လေထက်ပေါ့ပါးကာ ဂျဲလ်မှထုတ်ယူထားတဲ့ အလွန်ပေါ့ပါးတဲ့
Aerogel ထက်ပင်ပိုပြီး အကြိမ် (၁ထောင်) သန်မာပါတယ်။ Frozen smoke လို့ အမည်ပေးထားပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိကာ လေဟာနယ်နဲ့ ကားလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွေမှာ အလွန် အသုံးဝင်နိင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထို သုတေသနထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Xiaoyu Rayne Zheng ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သဘာဝကို ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီ Metamaterial တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရှိမူတွေထက် ပိုပြီး အကြိမ် များစွာ အကျိုးပြုနိင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေထဲမှာ ထို သဘာဝကို ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေကို ပြုလုပ်ရတာ ဖြစ်ပြီး သဘာဝထဲမှာတော့ သူတို့ကို တွေ့နိင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ အလွန်မာကြောကြပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ 3D ပုံဖော်ခြင်းတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရရှိနိင်ပါတယ်။
ထိုကြောင့် အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ ရုပ်ဝတ္တုဟာ ကမ္ဘာ့မှာ ရှိတဲ့ သိပ္ပံဂျာနယ်တွေမှာ ပါတဲ့ အရာတွေထက် အဆ ၁၀၀ မာကြောနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အောင်ဟိန်း ( ရိုးရာလေး)
တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေ တစ်နေ့ ကို ကျင်ငယ်ရေ လီတာပေါင်း ၁၀.၅ ဘီလီယံ ထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ အိုလံပစ်ရေကူးကန် ပေါင်း ၄၂၀၀ ကို ဖြည့်နိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ ကျင်ငယ်ရေကို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီကျင်ငယ်ရေတွေကနေ အိမ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့ မြို့ တွေအထိပါ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပေးနိုင်အောင်လို့ ကြံဖန်နေကြပါပြီ။
ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တစ်စုဟာ ကျင်ငယ်ရေတွေကနေ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ ကာဗွန်အက်တမ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရရှိဖို့ အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ fuel cells တွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ ဈေးမြင့်မားတဲ့ ပလက်တီနမ်နေရာမှာ လူသားတို့ ရဲ့ ကျင်ငယ်ရေကနေ သဘာဝအလျောက်ပါဝင်တဲ့ ကာဗွန်ကိုအသုံးပြုဖို့ ရည်မှန်းထားတာပါ။ Fuel Cells တွေဆိုတာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ အောက်စီဂျင်ကို ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာတဲ့ ဓာတုစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ စက်၊နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Fuel cell အတွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ပလက်တီနမ်သတ္တုဟာ ဈေးနှုန်းကြီးမားပြီး ဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုကို ဈေးကွက်အခြေအနေအရ နှောင့်နှေးစေနိုင်တာကြောင့် ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကျင်ငယ်ရေကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ ကာဗွန်ကို အစားထိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ကာဗွန်ဟာ ပလက်တီနမ်နဲ့ ဓာတ်သတ္တိတူညီမှုတွေရှိပြီး ဒီအတွက်ကြောင့် fuel cells တွေ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကျင်ငယ်ရေကနေ ထုတ်ယူမယ့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ ကားတွေ၊အိမ်တွေအထိပါ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကျယ်ပြန့် စွာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့် မှန်းထားကြပါတယ်။
လာဘ်စားခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ ၄၀၃ ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု အပါအဝင် တည်ဆဲ ဥပဒေတွေအရ အရေးယူထားတယ်လို့ ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရဲတပ်သား ၂၀၀ ကျော်ကိုလည်း အရေးယူထားပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာ အရေးယူထားတဲ့ ဦးရေဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစား ပပျောက်ရေး၊ အနှိပ်ခန်းနဲ့ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ လာဘ်စားလို့ အရေးယူခဲ့တာလို့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့်က ပြောပါတယ်။
ရဲအရာရှိ ၄၀၃ ဦး၊ ရဲတပ်သား ၂၁၂ ဦးနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ထမ်း ၆၀၀ ကျော်ကို အရေးယူခဲ့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အထိ အရေးယူထားတဲ့ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အမရပူရမြို့နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေး၊ လောင်းကစား၊ ကေတီဗွီနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေကို စစ်ဆေးအရေး ယူတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းတာကို ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့်က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်တာ၊ လောင်းကစား လုပ်တာ၊ ကေတီဗွီနဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေကို စီမံချက်နဲ့ ဖမ်းတဲ့ အချိန်မှာ ခေတ္တရပ်နေပေမယ့် ဖမ်းဆီးမှုမရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ကိုင် နေကြတယ်လို့ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ဆိုပါတယ်။
အဲဒါကတော့ လျှို့ဝှက်နည်းလမ်း မျိုးစုံနဲ့ ကြိုတင် သက်သေခံ အထောက်အထား ဖျက်ဆီးတာ၊ တိမ်းရှောင်တာတွေ လုပ်တဲ့အတွက် ဖမ်းဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့်က ရှင်းပြပါတယ်။
အလင်းရောင်ကို အနည်းငယ် အာရုံခံနိုင်သေးသော မျက်မမြင်များ မျက်မြင်အလား သွားလာနိုင်မည့် မျက်မှန် မကြာခင်လာမည်
အမြင်အာရုံ လုံးဝ ကွယ်ပျောက်ခြင်း မဟုတ်သည့်တိုင် အလင်းရောင်ကို အနည်းငယ်ခန့်သာ အာရုံခံ နိုင်တော့သဖြင့် မျက်မမြင် အဖြစ်သတ်မှတ် ခံထားရသူများ မျက်မြင် တစ်ယောက် အလား သွားလာနိုင်အောင် ကူညီပေးမည့် မျက်မှန်မျိုး လာမည့် နှစ်လောက်တွင် ဈေးကွက်တင် ရောင်းချဖြစ်ဖွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မျက်မှန် ဈေးသည်လည်း စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး စာလောက်သာ ရှိမည် ဖြစ်သည်။ ၀တ်ဆင်သူသည် မိမိရှေ့ လူလှုပ်ရှားမှုများ၊ မျက်နှာ အမူအရာများကို မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမြင်အာရုံ ဆိုးဝါးစွာ ချို့ယွင်းခြင်းကြောင့် အိမ်မှာသာ နေရသူများ လမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်၊ ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်နိုင်အောင်ပါ ယခုမျက်မှန်က ကူညီနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျက်မှန်တွင် ကင်မရာပါသည်။ ကင်မရာက ရိုက်ကူးပေးသည်ကို အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပေးရန် ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် ပရိုဆက်ဆာ ကို အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ထား နိုင်လောက်မည့် ဖုန်းတစ်လုံးစာ အရွယ် ဘူးငယ်ဖြင့် ထည့်ထားမည် ဖြစ်သည်။ မျက်မှန် ဖန်သား နေရာတွင်ကား သမားရိုးကျ မျက်မှန် အသားမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းနေသူများ မြင်နိုင်စေမည့် အီလက်ထရောနစ် ရုပ်ထွက် ဖန်သားပြင် ထည့်သွင်း ထားသည်။
ကင်မရာက ရိုက်ကူးပေးပို့ သည်များထဲမှ အရေးအကြီးဆုံးဟု ဆော့ဖ်ဝဲက ဆုံးဖြတ်သည့် အရာများကို ပိုထင်ရှားစွာ မြင်ရအောင် ကွန်ပျူတာစနစ်က ဖန်တီးပေးပြီး မျက်မှန် ဖန်သားပြင်တွင် ပြသပေးမည် ဖြစ်သည်။ နီးသောအရာများ ကို ပိုအရောင် တောက်ပစွာ ပြသပေးမည် ဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းသူ၏ အလင်းအာရုံ ခံနိုင်စွမ်းအလိုက် ချိန်ညှိ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမြင်အာရုံလုံးဝ ပျက်သုဉ်းပြီးမျက်စိက အလင်းကို အာရုံမခံနိုင်တော့ သူများအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း အလင်းရောင်ကို အနည်းငယ်လောက် အာရုံခံနိုင်သေးသော သူများ အတွက်ကား အဆင်ပြေစေမည် ဖြစ်သည်။
မျက်မှန်သည် နားကျပ်လည်း ပါဝင်ဦးမည် ဖြစ်သည်။ မျက်မှန်တွင်ပါသော ကင်မရာက ရိုက်ယူလိုက်သည့် ပုံများကို ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲက အဓိပ္ပာယ် ဖော်ကာ မည်သည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်းကိုပါ အသံဖြင့် ပြောပြပေးဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကားဂိတ်တွင် ရပ်နေလျှင် လာနေသည့် ကားသည် မည်သည့် နံပါတ် ဖြစ်ကြောင်းကို ကင်မရာက ရိုက်ထားသောပုံကို ကွန်ပျူတာက ဘာသာ ပြန်ကာ အသံဖြင့် ပြောပြပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ ရောက်လျှင်လည်း ဆိုင်နာမည်ကို အသံထွက် ရွတ်ပြမည် ဖြစ်သည်။ အနားတွင် လူတစ်ယောက် လိုက်ပါလာသည့် အလား အကူအညီရအောင် မျက်မှန်ကို ဖန်တီးထားကြောင်း သိရသည်။
မျက်မှန်ကို အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ သုတေသန အဖွဲ့က တီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး သုတေသနသိပ္ပံ (NIHR) က ရန်ပုံငွေ စိုက်ထုတ်ပေးထားပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်း (RNIB) နှင့် ပူးပေါင်း စမ်းသပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမား လစာများပေးဆောင်ခြင်းမရှိပဲ ပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်သူ ရှောင်ပြေးခြင်းအား လှိုင်သာယာ အလုပ်သမားရုံးမှ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် Master Sport ဖိနပ်စက်ရုံ၌ အလုပ်သမားလစာများ ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပဲ ပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်သူ
ရှောင်ပြေးခြင်းအား လှိုင်သာယာ အလုပ်သမားရုံးမှ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း လစာမရရှိသော
အလုပ်သမားများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရှိရသည်။
ပြီးခဲသည့် မေလ ၂၈တွင် တစ်ပတ် အလုပ်ပိတ်ကြောင်း စက်ရုံမှကြေငြာခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားများ
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ စက်ရုံကို ၁၉ ရက်နေ့တွင်မှ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဟု သူဌေး မျက်နှာလွဲဖြစ်သူ
မစ္စတာဂျောင်မှ ထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားများပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော်လည်း
စက်ရုံမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုပဲ ၂၆ ရက်သို့ ထပ်မံချိန်းသောကြောင့် စက်ရုံအလုပ်သမားများမှာ ပူပင်ပြီး လှိုင်သာယာ
အလုပ်သမားရုံးသို့ သွားရောက်အကြောင်းကြားရာအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း၊ ၂၆ ရက်နေ့ စက်ရုံသို့
အလုပ်သမားများ လာရောက်အလုပ်ဆင်းကြရာ စက်ရုံက ပေးမဝင်တော့ကြောင်း စက်ရုံလုံခြုံရေးများမှာလည်း လက်ရှိ
ကုမ္ပဏီမှ လုံခြုံရေးများမဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲထားကြောင်းသိရှိရသည်။
“၁၉ ရက်နေ့ကတည်းက စက်ရုံက ပိတ်တော့မယ်။ သူဌေးက ပြေးတော့မယ်လို့ ကျွန်မတို့က အသံကြားထားတယ်။ ဒီတော့
စိတ်ပူပြီးတော့ အလုပ်သမားရုံးကို သွားပြီးတော့ အကြောင်းကြားတာ။ ဒီတော့ အလုပ်သမားရုံးက စက်ရုံက မပိတ်သေးပဲနဲ့
ပိတ်တယ်လို့ ပြောလို့ နင်တို့ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရတယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်” ဟု ယင်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမား
သို့သော် ၂၆ ရက်နေ့တွင် စက်ရုံပိတ်လိုက်ပြီလို့ကြေငြာလိုက်ကြောင်း စက်ရုံသူဌေးမျက်နှာလွှဲတစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စတာဂျောင်မှ
ပြောကြားသောကြောင့် အလုပ်သမားများမှာ လှိုင်သာယာအလုပ်သမားရုံသို့ သွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း ထိရောက်သည်
အရေးယူမှု ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မစ္စတာဂျောင်မှ စက်ရုံပိတ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးသို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း သို့သော်
စက်ရုံပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူ့အနေနှင့် အလုပ်သမားများကိစ္စအတွက် မည်သို့မျှ ဖြေရှင်းပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း
“ကျွန်မတို့မှာ အားလုံး လူ ၈၀၀ လောက်ရှိတယ်။ လက်လုပ်လက်စားတွေချည်းပဲ၊ လစာမရရင် ဘာလိုစားလို့ရမှာလဲ၊ လကုန်ရင်
အဆောင်ခပေးရမယ်၊ အနောက်မှာ မိသားစုတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီး ရှိသေးတယ်။ အခုက စက်ရုံထဲကိုလည်း အဝင်မခံတော့ဘူး။
သူဌေးကလည်း ပြေးသွားပြီ။ အလုပ်သမားရုံးကလည်း ဘာမှ အရေးတယူမလုပ်ပေးရင် ကျွန်မတို့ ဒီလူ ၈၀၀ က ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့
ရှေ့ဆက်မှာလဲ” ဟု စက်ရုံအလုပ်သမား မဝင်းဝင်းလှိုင်မှ ပြောကြားသည်။
“စက်ရုံတစ်ခု ပိတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် ဥပဒေအရ ဒီစက်ရုံရှိနေတဲ့ မြို့နယ်က အလုပ်သမားရုံးကို အကြောင်းကြားပြီးမှ ပိတ်လို့ရတယ်။
အကြောင်းမကြားပဲ ပိတ်ခွင့်မရှိဘူး”ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အလုပ်သမား အရေးကို ဆောင်ရွက်နေသော တရားလွှတ်တော်
သို့ရာတွင် မန်နေဂျာဖြစ်သူမှ အလုပ်သမားရုံးအား စက်ရုံပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါလျှက်
အလုပ်သမားရုံးနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာတို့မှ အလုပ်သမားများအား ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိခြင်းကြောင်း၊ ယင်းစက်ရုံပိတ်သိမ်းမှုတွင်
အလုပ်သမားများ နောက်ကွယ်၌ စက်ရုံပိုင်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားရုံးအရာရှိများကြား မရိုးသားမှုများရှိနေနိုင်ကြောင်း တွေးထင်စရာ
ဖြစ်နေသည်ဟု အလုပ်သမားများမှ သုံးသပ်ပြခဲ့သည်။
အရေပြားဒဏ်ရာများကို ပဋိဇီဝဆေးမသုံးဘဲ ပျောက်ကင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းတွေ့ရှိ
အစားအစာများကို ပိုးမွှားသန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်နည်းပညာတစ်ခုသည် ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် စိန်ခေါ်မှုကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သော ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုကို ကုစားပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
Massachusetts General Hospital (MGH) မှ သုတေသီများသည် အရေပြားအနာဖြစ်စေသည့် ဆေးမတိုးသော ဘက်တီးရီးယားများကို ဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများ အသုံးပြု၍ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးဖယ်ရှားရာ၌ ယခင်ကထက် အဆ (၁၀၀၀)ကျော်လျော့နည်းအောင် ရှင်းလင်းနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
““စဉ်ဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားနေတဲ့ လျှပ်စစ်စက်ကွင်း နည်းပညာဟာ ဘက်တီးရီးယား မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကို ပစ်မှတ်ထား သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး ဒဏ်ရာတစ်ခုရဲ့ အရေပြားအထူအတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အနာပိုးသန့်စင်ဖို့ ပဋိဇီဝဆေးမသုံးတဲ့ နည်းပညာအသစ်တစ်ခု ရရှိ လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်””ဟု သုတေသီ Alexandar Goldberg ကဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လူ (၅၀၀၀၀၀)ခန့် အရေပြားလောင်ဒဏ်ရာကြောင့် နှစ်စဉ် ဆေးကုသမှု ခံယူရသည်။ အရေပြား လောင်ကျွမ်းမှု ကုသရာတွင် လောင်ထားသည့် အလွှာများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အရေပြား အစားထိုးခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးလိမ်းခြင်း၊ ပိုးသတ်စကာ အုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရသည်။
ဆေးမထိုးသည့် ဘက်တီးရီးယား ဖြစ်ကြသော Acinetobacter baumannii နှင့် Staphy lococcus aureus တို့သည် ဆေးမသုံးသည့် နည်း လမ်းတစ်မျိုးဖြင့် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။
လျှပ်စစ်စက်ကွင်း နည်းပညာကို အစားအစာ ဘက်တီးရီးယား သန့်စင်ရန် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ အရေပြားပိုးသန့်စင် နိုင်ကြောင်းကို ကြွက်များ၌ စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ ညမထွက်ရအမိန့်ကို နောက်ထပ် သက်တမ်း (၂) လ တိုးမြှင့် လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
“ မနေ့ညနေ ၉ နာရီ အချိန်မှာ အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ညမထွက်ရအမ်ိန့်ကို (၂) လ သက်တမ်း တိုးတယ်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု သံတွဲဒေသခံ ကိုနေဇော်က ပြောသည်။
ယခင် သတ်မှတ်ထားသော ညနေ ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီ အချိန်ထိ ညမထွက်ရ အတစ်စုံတစ်ရာ အပြောင်းအလဲ မရှိကြောင်း၊ သက်တမ်းကိုသာ နောက်ထပ် (၂) လတိုးလိုက်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာမှ ကျေညာခဲ့ကြောင်း သူကဆက်ဆိုသည်။
သံတွဲမြို့တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ စထုတ်ခဲ့သည်။ သံတွဲမြို့ အခြေအနေမှာ တစထက် တစ တည်ငြိမ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသော် ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ဆက်လက်ထားရှိဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ စစ်တွေတွင်လည်း ညမထွက်ရအမ်ိန့်မှာ ဆက်လက်တည်တံ့နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ည ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၂၉ ဇွန်လ ၂၀၁၄)
ချီလီနှင့် ရင်ဆိုင်မည့်ပွဲစဉ်အတွက် ဘရာဇီးကစားသမားတွေ ကြောက်စိတ်ဝင်ဟု နည်းပြပြော
ဘရာဇီး နည်းပြ စကုိုလာရီ
ချီလီနဲ့ ရင်ဆုိုင်မယ့် ပွဲစဉ်အတွက် ကစားသမားတွေဟာ ကြောက်စိတ်တွေ ၀င်လာနေတယ်လုို့ ဘရာဇီး နည်းပြ စကုိုလာရီက ပြောပါတယ်။
အိမ်ရှင် ဘရာဇီးအသင်းဟာ ရှုံး ထွက်အဆင့်မှာ တောင်အမေရိကပြိုင်ဖက် ချီလီနဲ့ ရင်ဆုိုင်ရမှာပါ။ ရှုံးထွက်အဆင့် ရောက်လာရင် ကြောက်စိတ်တွေ ၀င်လာတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ရှုံးမှာကုို စုိုးရိမ်တယ်လုို့ ဘရာဇီးနည်းပြ စကိုလာရီက ပြောပါတယ်။
ဘရာဇီးအသင်းဟာ အုပ်စုတွင်းမှာ ၂ ပွဲနုိုင် တပွဲ သရေကျထားပါတယ်။ ချီလီအသင်းကလည်း အုပ်စုတွင်း စပိန်နဲ့ သြစတြေးလျကို အနိုင်ယူထားပါတယ်။
ဘရာဇီးနဲ့ ချီလီတုို့ နောက်ဆုံး ကစားတဲ့ ၁၂ ပွဲမှာ ဘရာဇီးက ၁၀ပွဲနုိုင်ပြီး ၂ ပွဲ သရေကျထား ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ၃ ကြိမ် ဆုံဖူးထားပြီး ၃ ကြိမ်စလုံး ဘရာဇီးက အနုိုင်ရထားပါတယ်။
အိန္ဒိယတွင် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အန္ဒရာ ပရာဒက်စ် ပြည်နယ်မှာ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး လူအနည်းဆုံး ၁၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကျေးရွာကို ဖြတ်ပြီးသွယ်တန်းထားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှု ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျေးရွာသားတွေ သေဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွာသား ၂၀ လည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းဆဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လက အန္ဒရာ ပရာဒက်စ် ပြည်နယ်မှာပဲ ရေနံချက်စက်ရုံတခု မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ လူ ၂၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပေါက်ကွဲမှုမှာ ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့သူတွေကို ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီနဲ့ အိန္ဒိယစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မော်ဒီကလည်း သေဆုံးသူတဦးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၊ ဒဏ်ရာရသူတွေ တဦးကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကျော် လျော်ကြေးပေးမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး လက်မှတ်ထိုးဆန္ဒပြုသူပေါင်း ၂၆ သိန်း ကောက်ယူရရှိထား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှု စတင်ခဲ့တဲ့ တလအတွင်း တိုင်း ၃ တိုင်းမှာ လက်မှတ်ပေါင်း ၂၆ သိန်းလောက် ကောက်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးထင်လင်းဦးက ပြောပါတယ်။
DASSK Hlai Bweပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၇ ရက်ကစပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဖို့ ဆန္ဒပြုလက်မှတ်ကောက်ယူခဲ့ရာမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ မကွေးတိုင်းတို့မှာ အခုလို ကောက်ယူရရှိထားတာဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းတွေက လက်မှတ်စာရင်းတွေ ရောက်မလာသေးဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
“အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ၂၅ သိန်း ၂၆ သိန်းလောက် စာရင်းဝင်နေပြီ။ ဒါက အကုန်မဟုတ်သေးဘူး။ စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်း တွေဆိုရင် သွားရေးလာရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးက ခက်ခဲတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဆီကို ရောက်မလာသေးဘူး။ နောက်ကချင်ပြည်နယ်။ ပြည်နယ်တွေကနေ ကျနော်တို့ဆီကို ရောက်မလာသေးဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူတဲ့ ဒေသတွေ ဆိုရင် အခု သိန်း ၂၀ ကျော်နေပြီ ခင်ဗျ။”
ဒါ့အပြင် အခုရက်ပိုင်း လက်မှတ်ထိုးကောက်ခံမှုတွေမှာ လူတစုတဖွဲ့က မသမာမှုတွေ ပြုလုပ်လာနေတာတွေ့ရပြီး ဘယ်အုပ်စုဘယ်အဖွဲ့အစည်းက လုပ်နေသလဲဆိုတာကို စုံစမ်းနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“လက်မှတ်ရေးထိုး ကောက်ယူမှုကိစ္စတွေမှာ တန်ပြန် သဘောသက်ရောက်တဲ့ဟာလေးတွေ လုပ်လာတွေ့တယ်ဗျ။ လက်မှတ်ရေးထိုးကောက်ယူတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့လူတွေ မဟုတ်တဲ့ သူတွေဝင်လာပြီး လူတွေကို မချေမငံ ဆက်ဆံပြောဆိုတာလေးတွေရှိတယ်။ ၄၃၆ ကို လက်မှတ်ထိုး၊ မထိုးဘူး။ ဘာလို့ထိုးရမှာ ၄၃၆ က ဘာလဲဘာညာဆိုရင်၊ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား၊ တိုင်းပြည်အတွက် ဒါလေးတောင် တာဝန်မကျေနိုင်ဘူးလား ဘာညာဆိုပြီး လုပ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေပေါ့။”
မန္တလေးတိုင်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်း ဦးထင်လင်းဦးက ပြောပါတယ်။
အန်အယ်ဒီနဲ့ ၈၈ တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲတွေ ပြုလုပ်နေရာမှာလည်း ကချင်၊ ချင်းစတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ဟောပြောပွဲကျင်းပခွင့် မပြုခဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကို လာမယ့်ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်အထိ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဆန်းဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့၍ ဧရာဝတီတိုင်းမှ လယ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် (ဓာတ်ပုံ - နေလင်းထွန်း)
သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်အားထိန်းသိမ်းခဲ့သည့်အတွက် ဧရာဝတီ တိုင်းအတွင်းမှ လယ်သမားများ နှင့် ဒေသခံများက ဇူလိုင် ၁ ရက် တွင် ပန်းတနော်မြို့၌ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒ ပြပွဲစီစဉ်သူများက ပြောသည်။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကို နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ပုသိမ်၊ ပန်းတနော်၊ ငပုတော၊ ကျောင်းကုန်း၊ ကန်ကြီးထောင့် ဒေးဒရဲ၊ မြောင်းမြ စသည့်ဒေသ တွင်း မြို့နယ်များမှ လယ်သမား များ၊ ဒေသခံများပါဝင်မည်ဖြစ် ကြောင်း တောင်သူလယ်သမား အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်၏ ဧရာ ဝတီတိုင်းတာဝန်ခံဦးကြည်လွင် က ပြောသည်။
‘‘ဦးဆန်းဆင့်ဟာ တိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တုန်းကလည်း ပါတီမျက်နှာမကြည့်ဘဲ ပြည်သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီး လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်’’ဟု ဦးကြည်လွင်ကပြောသည်။
ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည့် ဦးဆန်းဆင့်သည် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန် ပေးခံခဲ့ရပြီး ထိုစဉ်ကတည်းက ဒေသခံများ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က လယ်သိမ်းခံရမှုများ၊ အင်းလုပ်ငန်းများအကြား အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ဦးဆန်းဆင့်သည် ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်အပါအ၀င်သူ၏အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်ဆံရေး မပြေလည်သူဖြစ်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ကတိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ဦးဆန်းဆင့်အား တိုင်းလွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးမှဖယ်ရှားပြီး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်စဉ်ကလည်း ဒေသခံများ က ပန်းတနော်မြို့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ ကြသေးသည်။
‘‘အခုအစိုးရလုပ်နေတဲ့ပုံစံ က သူလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။ တစ်ပါတီအာဏာရှင်၊ စစ်အာ ဏာရှင်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ ဘာ ကြောင့် အရေးယူတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကိုချပြဖို့တော့ လိုအပ် တယ်’’ဟု ဦးကြည်လွင်က ပြော သည်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်သည် နိုင်ငံပိုင်ငွေများ အလွဲသုံးစားလုပ် သည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဇွန်လ၁၉ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်မှ အကူအညီပေးမည့် သဘောတူစာချုပ်လေးခု လက်မှတ်ရေးထိုး
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူများ သဘောတူညီမှု နှစ်(၆၀)ပြည့်အခမ်းအနားတွင် တရုတ်သမ္မတ စီကျင်းပင်၊ ဝန်ကြီးချုပ် လီကီကျန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အိန္ဒိယဒုတိယသမ္မတ ဟာမစ်အန်ဆာရီတို့ကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အေပီ)
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လေးကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ အကူအညီပေးရေး သဘောတူစာချုပ် လေးခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အာဆီယံ တရုတ်ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်လုံခြုံရေးတို့ကို တရုတ်သမ္မတ စီကျင်းပင်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်က မြန်မာသို့ အကူအညီပေးရေး လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွင် မြန်မာ-တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ အပြန်အလှန်ထူထောင်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုသဘောတူညီချက်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး ကဏ္ဍများတွင် သဘောတူညီချက်၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံစီမံချက်အတွက် ဖြစ်နိုင်စွမ်းလေ့လာမှုနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ရတနာပုံဆိုက်ဘာ စီးတီးအတွက် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ အ ကူအညီပေးရေးစသည့် အချက် လေးချက်တို့ကို သဘောတူ လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်သမ္မတ စီကျင်းပင်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ ၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ တရုတ် ဘက်စုံ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွား ရေးဇုန် အကောင်အထည်ဖော် ရေး၊ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးတွင် တရုတ်က နည်းပညာအကူအညီပေးရေး၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြား ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရေး နှင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဆိုင်ရာ တို့ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သမ္မတ၊ ခရီးစဉ်တွင် အတူလိုက်ပါသွားသည့် သမ္မတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ် က ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ၎င်း၏ သမ္မတသက်တမ်း သုံးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အနက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ လေးကြိမ်မြောက်အဖြစ် အကြိမ်အများဆုံး သွားရောက်ထားပြီး ယခုခရီးစဉ်မှာ တရုတ်-မြန်မာ-အိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံက သဘောတူချမှတ်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် ရေးမူဝါဒငါးရပ် နှစ်ခြောက်ဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အဖြစ် ဘေဂျင်းမြို့သို့သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး မူဝါဒငါးချက်ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်က အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် နေရူး၊ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်းတို့က တစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရေး၊ လေးစားရေး၊ နိုင်ငံများတန်းတူညီရေး၊ ကျူးကျော်ခြင်း မပြုရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့ ဖြင့် စတင်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၂၇ ရက်မှ စတင်ခဲ့သည့် လေးရက်ကြာ တရုတ်နိုင်ငံ သို့ ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဖြစ်သော ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးဇေယျာအောင်၊ ဦးဝင်းရှိန်နှင့် ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဒေါ်စန္ဒာခင်တို့ လိုက်ပါသွားသည်။
နေပြည်တော်ကျောက်မျက်ပွဲ သုံးရက်အတွင်း ယူရိုလေးသန်းကျော် ရောင်းရ
ကျောက်များကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူယူနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ − မိုးညို)
မြန်မာ့ကျောက် မျက်ပြပွဲတွင် သုံးရက်အတွင်း ယူရိုလေးသန်းကျော်ဖိုး ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း ကျောက်မျက်ပြပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ဇွန်လ ၂၄ ရက်မှ ကျောက် မျက်များကို ခင်းကျင်းပြသရောင်း ချရာတွင် ကျောက်မျက်အတွဲ ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အခုရတဲ့အတိုင်းအတာမှာ ဒီအတိုင်းသတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ တချို့က လေလံငွေကို ကြိုပေး ထားပြီးမှ ငွေအဆုံးခံပြီး မ၀ယ် တာတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုမ၀ယ် တာတွေက ကျောက်စိမ်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လောလော ဆယ်ငွေကြေးသတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာတော့ အလျှော့အတင်းလေး တွေရှိပါတယ်’’ဟု ကျောက်မျက် ပြပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲဌေးကပြောသည်။
ကျောက်စိမ်းအတွဲများနှင့် ကျောက်မျက်အတွဲများကို ၀ယ်ယူမည့် ပြည်ပကုန်သည်တစ်ဦးလျှင် အာမခံစပေါ်ငွေ ယူရိုငါးသောင်း ပေးဆောင်ရပြီး ပြည်တွင်းကုန် သည်တစ်ဦးလျှင် အာမခံ စပေါ် ငွေ ယူရိုနှစ်သောင်းနှုန်း ပေး ဆောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက် မျက်အတွဲများ ၀ယ်ယူမည့်ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပကုန်သည်များအနေ ဖြင့် အာမခံစပေါ်ငွေ ယူရိုတစ် သောင်းနှုန်းပေးဆောင်ရခြင်းဖြစ် သည်။
ကျောက်ကုန်သည် အချို့ သည် အာမခံစပေါ်ငွေပေးဆောင် ပြီး ကျောက်မျက်ပွဲများ၌ ၀ယ်ယူ ခြင်းမရှိရာ အဆုံးခံမှုများရှိနေပြီး အများစုမှာ တရုတ်ကုန်သည်များ ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်စိမ်းဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရွှေရတုပွဲဖြစ် လို့ အတွဲတွေ တော်တော်များ များရောင်းထားတယ်။ အတွဲအ များစုကို တရုတ်ကုန်သည်တွေက ဈေးကောင်းပေးဝယ်တဲ့အတွက် မြန်မာကုန်သည်တွေ လိုချင်သ လောက်မရကြပါဘူး။ ဒီနှစ်က တော့ မြန်မာကုန်သည်တွေပိုပြီး ၀ယ်ယူနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား ပါတယ်။ အရင်နှစ်က ပွဲတွေထက်စာရင် ဒီနှစ်က ကျောက်ကောင်း တွေပါလာတာတွေ့ရတယ်။ မြန် မာကုန်သည်တွေ ဈေးကောင်း ပေးဝယ်ရင်တော့ အမြတ်ပဲ’’ ဟု မြစ်ကြီးနားကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်း ရေးမှူး ဦးလာခရီကပြောသည်။
အမေဂျမ်းနတ်ပွဲတွင် ကွန်ဒုံးနှစ်သောင်းဝန်းကျင် အခမဲ့ဝေ
မြန်မာ့ ၃၇ မင်း နတ်သမိုင်းတွင် အဆဲအဆို ကြမ်းတမ်းသောနတ်အဖြစ် ထင်ရှားသည့် အမေဂျမ်းနတ်ပွဲကို တံတားဦးမြို့နယ် အေးကြည်ကုန်း ကျေးရွာတွင် ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့) ကျင်းပနေရာ တိုင်းဒေသကြီး ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ကွန်ဒုံးပေါင်း နှစ်သောင်းဝန်းကျင်ကို အခမဲ့ ဝေပေးကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးမှ ဒေါက်တာကျော်စိုးက ပြောကြားသည်။
HIV/AIDS ဖြစ်ပွားမှု များပြားလာသည့်အတွက် ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း လျော့ကျလာစေရန် အမြို့မြို့ အနယ်နယ်မှ အမေဂျမ်းနတ်ပွဲကို လာရောက်သူများခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ယင်းနတ်ပွဲသည် တစ်ရက်တာ ကျင်းပသဖြင့် ကွန်ဒုံးများကို ဝေငှခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“အခုဆိုရင် အမေဂျမ်းပွဲ၊ တောင်ပြုန်းပွဲတွေ စတော့မယ်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က လူတွေကလာပြီး ပျော်ပါးကြတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် ရောဂါကူးစက်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလိုပွဲတော်ရက်တွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်” ဟု ၎င်းက လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအနေနှင့် နယ်စွန်နယ်ဖျားရှိ တရားမဝင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ပြည့်တန်ဆာ အခန်းများ၊ ရိုးရာပွဲတော်ရက်များ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများတွင် သွားရောက်၍ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရောဂါပိုး ရှိ မရှိ သွေးစစ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ရောဂါ လက္ခဏာ ဖြစ်ပွားလာပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆေးပေးဝေရေးဌာနသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက် ပြသသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာကျော်စိုးက ပြောကြားသည်။
“တောင်ပြုန်းပွဲကိုတော့ မသွားမဖြစ်သွားတယ်။ အရမ်းလည်း လူတွေရှုပ်တယ်။ နောက်ပြီး ပြောချင်တာက မမှားသင့်တာကိုပါပဲ။ တစ်ခဏတာနဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို မလဲသင့်ဘူးထင်တယ်” ဟု မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်ရှိ အလှပြင်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မိန်းမိန်းက ပြောကြားသည်။
မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၅
၂၀၁၅ ကာလအလွန် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်လာနိုင်ဟု နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ဟောကိန်းထုတ်
ရွှေမြင်တင် ဘုရားကြီး အတွင်း စပါးအုံး မြွေကြီးမှ ဥများ ဥချလျက်ရှိ
ကျဆုံး တပ်မတော်သား ထောက်ပံ့ကြေးမှာ ဂျနီဗာလိုပတ်၏ တင်ပါးတစ်ခြမ်း အာမခံထားရှိမှု မျှသာရှိဟု ဦးလှဆွေ ပြော
အေးဆေး သစ္စာရှိပြီး ရိုးသားမှုနှင့် အနစ်နာ ခံနိုင်သည့် ယောင်္ကျားပီသသူကို လိုအပ်သည်ဟု ယုသန္တာတင်ဆို
အောင်ရင်ငြိမ်း ၏ ရိုမန်ဘော့ထ်တွေရဲ့ကမ္ဘာ စာအုပ် ဖတ်ပြီး ရွံရှာမိသည်ဟု သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးရဲထွဋ္ဋ်မှ ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်သစ်သည် တပ်မတော်မှ လာခြင်းကို မေ့ထားရန် ဒေါက်တာအေးမောင် ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သမ္မတ၏ လျာထားခြင်း ခံရသော ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ခြင်း တပ်မတော်လာသည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းကို မေ့ထားရန် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ဒု-ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာအေးမောင်က ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံ၏ မူဝါဒများကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား ရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိုသို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တာ တပ်မတော်ကလာတာ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ခေတ္တမေ့ပေးပါ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် ဘယ်သူနဲ့ မဆို ကျွန်တော်တို့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရပါမယ်"ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌် တိုင်းရင်းသားအမတ်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အသွေးကို စိစစ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း စသော အကြောင်းအများကြောင့် လက်ရှိအမတ်များတွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့်အခြေအနေအားနည်းခြင်းများရှိကြောင်းထိုအခန်းအနားတွင်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ပ-ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးအေးသာအောင်က “လတ်တလောလုပ်ရမှာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ၂ဝ၁၅ အလွန်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
သံတွဲမြို့နယ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်ပုကမူ “ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးဆောင်ဖို့ ရခိုင်ပဲဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါမှ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒကို နားလည်မယ်။ ရခိုင်တွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ လွယ်ကူမယ်”ဟု မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီသည် နှစ်ပါတီ ပေါင်းစည်းအပြီး မူဝါဒများကို ရန်ကုန်ရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသို့ ရှင်းလင်းဖြင်းဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည့် အခြေအနေနှင့် ၂ဝ၁၅ ရွေကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည့် အမတ်အရေအတွက်ကို တိကျစွာ ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဟုဆိုသည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီနှစ်ခုသည် ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပူးပေါင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက်တွင် ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးလှမောင်တင် နုတ်ထွက်ပြီးနောက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်သည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရမည် ဟူသည့် အချက်များပါရှိသော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။
(နိရဉ္စရာ- ၂၈ ဇွန်လ ၂၀၁၄)
သူတို့ (၄) ဦးသည် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အောက်လမ်းက အသွား ယင်းနိုင်ငံ၏ ဗဟန်းပြည်
နယ် တမလွှား အရောက်တွင် မတော်တဆ ကားတိမ်းမှောက်မူ ဖြစ်ရာမှ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စိတ်ဖိစီးသော အလုပ်လုပ်နေ ရသူများ၊ စိတ်ဖိစီးသော ဘ၀ပုံစံမျိုးမှာ ကျင်လည်နေရသူများ အသက်ကြီး လာသည့်အခါ ရေတို မှတ်ဥာဏ် ပျောက်ဆုံး နိုင်ခြေပိုများကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေးလိုက်သည်။
စိတ်ဖိစီးသည့်အခါ ထွက်လာသော ကော်တီဇုန်းနှင့် ရေတိုမှတ်ဥာဏ်ကြား ဆက်စပ်မှုကို အမေရိကန် နိုင်ငံအိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့က လေ့လာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက် စိတ်ဖိစီးလေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်တီဇုန်း ဟိုမုန်းများများ ထွက်လေဖြစ်သည်။ ကော်တီဇုန်းသည် ရေတိုမှတ်ဥာဏ် အားနည်းသွားစေသည့် အဓိက လက်သည် ဖြစ်သည်။ ရေတို မှတ်ဥာဏ်ဆိုသည်မှာ မြင်လိုက် ကြားလိုက် သိလိုက်သည်များကို မြင်ပြီးပြီးချင်း၊ သိပြီးပြီးချင်း၊ ကြားပြီးပြီးချင်းမှာပင် ပြန်စဉ်း စားမရနိုင်တော့ဘဲ မေ့ပျောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေတိုတွင် စဉ်းစားမရသော်လည်း နောင်ကြာလာလျှင်ကား အကြောင်း တိုက်ဆိုင်သည့်အခါ ရေရှည် မှတ်ဉာဏ်အဖြစ် ပြန်မှတ်မိတတ် သည်မျိုးတော့ ရှိသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ရေတိုမှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးခဲ့ သော်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုအောက် အနေများသူများကား ကြီးလာသည့်အခါ အခြား သူများထက် ရေတိုမှတ်ဥာဏ် ပျောက်ဆုံးနိုင်ခြေ များသည်ကို သုတေသနက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကော်တီဇုန်း ပမာဏ အလွန်အမင်း မမြင့်တက်အောင် ထိန်းနိုင်ရေးသည် ရေတိုမှတ်ဉာဏ် မပျောက်ဆုံးအောင် ကာကွယ်ရေး အဓိကအချက် ဖြစ်သည်။ ကော်တီဇုန်း မတက်စေလိုလျှင် စိတ်မဖိစီးအောင် နေတတ်ဖို့ လိုမည်။ ကော်တီဇုန်းသည် အဆိုး ဘက်ချည်းတော့ မဟုတ်။ ကော်တီဇုန်းသည် လူတစ်ယောက်ကို ဘ၀စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် အသင့်ပြင်ပေးသည်။ သတိ ရှိနေအောင် နှိုးဆွပေးသည်။ အန္တရာယ် အခြေအနေအောက်မှ ရုတ်ချည်း ရုန်းထွက်နိုင်အောင် လူကို အသင့်ပြင်ပေးထားသည်။ ရုတ်တရက် လန့်စရာ ကြုံလာလျှင် လူသည် ထိတ်ခနဲဖြစ်ကာ လွတ်ရာကို အလိုလျောက် ခုန်ရှောင်မိတာမျိုးသည် ကော်တီဇုန်း၏ အစွမ်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးတွင် ကော်တီဇုန်းသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါသည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကော်တီဇုန်းသည် အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော ဟိုမုန်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် လူတစ်ယောက် ရေရှည် စိတ်ဖိစီးနေ၍ ကော်တီဇုန်းများ တောက်လျှောက် ထွက်နေလျှင်ကား မကောင်းတော့။ လူကို အချိန်ပြည့် နိုးကြားအသင့် ဖြစ်နေအောင် ကော်တီဇုန်းက လုပ်ထားခြင်းကြောင့် ကြာလာသည် နှင့် အမျှ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဒဏ်ဖြစ်လာတော့သည်။ အရေးကြုံလာလျှင် အစာအိမ်သည် ညှစ်ထားတတ်သည် ဖြစ်ရာ ကော်တီဇုန်း ကြာရှည် ထွက်နေခြင်းဖြင့် အစာအိမ်နာ အစာအိမ်ရောဂါ ဖြစ်လာတတ်သည်။ စိတ်ရှုပ် လာတတ်သည်။ ၀လာတတ်သည်။ သွေးတိုးလာတတ်သည်။ အခြား ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိသည်။
““ဦးနှောက်ကို ယိုယွင်းစေတဲ့ထဲမှာ စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ ဟိုမုန်းတွေဟာ အဓိကလက်သည်ပဲ။ ကော်တီဇုန်းဟာ ကမ်းပါး ကျောက်ဆောင်ကို ရိုက်ခတ်တဲ့ လှိုင်းလိုပါပဲ။ ဦးနှောက်ဆိုတဲ့ ကမ်းပါး ကျောက်ဆောင်ကြီးကို နှစ်တွေနဲ့ချီ ရိုက်ခတ် လာတဲ့အခါ နောက်ဆုံးမှာ ဦးနှောက်ဟာ ယိုယွင်းရတာပါပဲ””ဟု အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့မှ စိတ်ပညာပါမောက္ခ ဂျက်ဆင်ရတ်လေးက ပြောသည်။
ကော်တီဇုန်း တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာသည်နှင့် အမျှ ရေတိုမှတ်ဉာဏ် အလုပ်လုပ်ရာ ဦးနှောက် အရှေ့ခြမ်းပိုင်းမှ သတင်းပို့ အချက်ပြ ဦးနှောက်ဆဲလ် (ဆီနပ်စ်) များ ပို၍ ပို၍ သေဆုံးသွားကြသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဆီနပ်စ်များသည် ဦးနှောက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သတင်း အချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ပေးပို့သည့် တာဝန် ယူထားသလို၊ မှတ်သား ထားသည်များ သိမ်းထားပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့်အချိန် ပြန်ထုတ်ပေးခြင်းများ ကိုလည်း ထိုအပိုင်းက လုပ်ပေးသည်။ လူတစ်ယောက် အသက်ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ ရှေ့ပိုင်းဘ၀ တစ်လျှောက် စိတ်ဖိစီးစရာများကြောင့် ထွက်ခဲ့သည့် ကော်တီဇုန်းများ တိုက်စားမှုကြောင့် ဆီနပ်စ်များ လျော့ပါး ပျောက်ဆုံး သွားကြသည်။ ထိုအခါ ရေတို မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံး သွားရသည်။ အသက်ကြီးလာလေ ရေတို မှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးလေမှာ ဓမ္မတာ တစ်ခုလို ဖြစ်သော်လည်း ဘ၀တစ်လျှောက် စိတ်ဖိစီးမှု များခဲ့သူများကား အခြားသူများထက် စောစီးစွာ ရေတိုမှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးတတ်သလို၊ ပျောက်ဆုံးမှုလည်း ပိုပြင်းထန်ကြောင်း သုတေသနက ထောက်ပြသည်။
ကော်တီဇုန်းကြောင့် ဦးနှောက် အခြားအပိုင်းများလည်း သာမန်ထက် ပိုမြန်စွာ အိုမင်းတတ်ကြောင်း ယခင် သုတေသနများက ထောက်ပြထားပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် ရေတိုမှတ်ဉာဏ် အလုပ်လုပ်ရာ ဦးနှောက် အရှေ့ခြမ်းအတွင်းပိုင်းရှိ ဆီနပ်စ်များကို ထိခိုက်ခြင်းကိုကား ယခုအကြိမ်မှသာ ဦးဆုံး သုတေသန လုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု လေ့လာမှုသည် ကော်တီဇုန်းကြောင့် အသက်ကြီးလာသည့် အခါ ရေတို မှတ်ဉာဏ် ပိုဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်နိုင်ပုံကို ဖော်ထုတ်ထားနိုင်ရာ မည်သို့ ကာကွယ်လျှင် ရေတိုမှတ်ဥာဏ် တာရှည် တည်မြဲမည်ကို ပါ ဆက်လက် ဖော်ထုတ် နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုတေသန စစ်တမ်းက ရေးသားထားသည်။ ထို့အပြင် လူတစ်ဦးချင်းစီတွင် ကော်တီဇုန်း ထွက်ရှိနှုန်းကို အလွန်များ မလာအောင် ထိန်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စစ်တမ်းအဖွဲ့က ရေးသားထားသည်။ လေ့လာမှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
သုတေသန တွေ့ရှိချက်များကို နာ့ဗ်ကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာ ဂျာနယ် Neuroscience တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
အလုပ်ကြောင့် ရေရှည် စိတ်ဖိစီးနေသူများ၊ ချစ်ခင်သူများ သေဆုံးခြင်းကြောင့် ဘ၀တစ်သက်တာတွင် မကြာမကြာ ဆိုသလို စိတ်ကျ စိတ်အားငယ်ကာ စိတ်ဖိစီးရသူများ စသည့် ကော်တီဇုန်း အထွက်များသူများကို ကော်တီဇုန်း အထွက်နည်းအောင် သဘာဝကျကျ နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ပေးနိုင်မည် ဆိုပါက ထိုလူများ အသက်ကြီးသည့် အခါ ရေတိုမှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးခြင်းချိန် နောက်ရောက်သွားအောင် နှင့် ဆိုးဝါးမသွားအောင် ဆောင်ကြဉ်း ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဘ၀တစ်လျှောက် စိတ်ဖိစီးစရာများကြောင့် ကော်တီဇုန်း ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး ရေတို မှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးခြင်းသည် အသက် ၆၅ နှစ် ခန့်တွင် လက္ခဏာ စတင်ပြသတတ်ကြောင်း သုတေသနက ဖော်ပြသည်။ အသက်ကြီး လာသည့်အခါ မှတ်ဉာဏ် လျော့နည်းလာခြင်း ကိစ္စတွင် စိတ်ဖိစီးခြင်း ကြောင့်ထွက်သည့် ကော်တီဇုန်းသည် အဓိကကျသည် မှတ်သော်လည်း ထိုတစ်ချက်တည်း ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူဖို့ မဟုတ်ဘဲ အခြားသော လူမှုစီးပွားနှင့် ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များလည်း ဆက်စပ်နေသေး ကြောင်းကို သတိမူရမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း စစ်တမ်းက ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
Ref: Always stressed ?
Beware – it’ll affect your short-term
memory in old age by Lizzie
Parry (Daily Mail)
မြိတ်မြို့တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန် ၂၆ ရက်နေ့တွင် မြိတ်မြို့နယ်တရားရုံးအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို
သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ပြန်လာသော ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း ဆိုသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
“တရားရုံးရှေ့မှာ တရားခံလို့မသတ်မှတ်ရသေးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေအနေနဲ့ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးလို့ ရပါသလား။
ဖမ်းဆီးတဲ့ပုဒ်မက ၄၂၀ ပါ လူသတ်မှု၊ဓါးပြမှု မို့လို့ လူရှေ့သူရှေ့မှာ ရိုက်တာလား။ ရိုက်တဲ့အထဲမှာ ရဲဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့
အမျိုးသမီးတောင်ပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို မေးတော့ အထက်ကခိုင်းလို့လုပ်ရတာတဲ့ အခု
အရိုက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်” ဟု မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောပြခဲ့သည်။
ဗိုလ်ကြီးစိုးဝင်းအောင်(ငြိမ်း) ထံမှ ငွေကျပ် ၄၄၅ သိန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း ကချေးယူခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ
အရစ်ကြစနစ်ဖြင့် ငွေကျပ် ၁၀၉၅ သိန်း လေးသောင်း ပေးသွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့တွင်
မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ဗိုလ်ကြီးစိုးဝင်းအောင်(ငြိမ်း)၏ တိုင်ကြားထားခြင်းကြောင့် လာရောက်ဖြေရှင်းပေးပါရန် အကြောင်းကြားစာ
ပေးပို့ထားသောကြောင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း မှ သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု
“ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့က မြို့နယ်ရဲစခန်းက စခန်းကိုလာခဲ့ပါဦး ဆိုပြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်။ကျွန်မတို့က တရားရုံးခေါ်စာနဲ့
တရားဝင်ခေါ်မှ လာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ဖမ်းချင်တယ်ဆိုရင် အိမ်မှာ လာဖမ်းပေါ့။အခုလို လမ်းမှာ
ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူးအရိုက်ခံရလို့ ဒဏ်ရာရတော့ ဆေးရုံကိုသွားပြတာ ဆေးရုံကလက်မခံပါဘူး
ရဲမှုခင်းဖြစ်လို့ ရဲဆေးစာပါမှ ခွင့်ပြုမယ်ပြောပါတယ်။ကျွန်မခု အပြင်ဆေးခန်းမှာပဲ ကုသနေရပါတယ်”ဟု ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း မှ
ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်းမှာ ရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် မျက်နှာတစ်ခြမ်းဖူရောင်၊လက်အရိုးအက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ
ဦးခေါင်းမူးနောက်နေကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်သက်၍ မြိတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်
မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘဲ ဖုန်းချပစ်ခဲ့သည်။
ခေတ်အခြေအနေအရ မြို့ပြမှာနေထိုင်သူတွေဟာ လူတိုင်းစေ့ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာကြောင့် အိမ်တွင်းမှုအတွက် လစ်ဟာမှုတွေ များလာကြပါတယ်။ ဒီလို လစ်ဟာသွားတဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်း ပေါ်လာပါပြီ။
အိမ်မှုကိစ္စဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသစ်ဟာ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ လူနေမှုဘဝ ပုံစံသစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဖော်ဈေးကွက်ကလည်း ပွဲစားတွေကြောင့် မှေးမှိန်လာချိန်မှာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့တဲ့ ကိုချစ်ဦးမောင်က အိမ်ဖော်-အိမ်ရှင် ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံမှုပုံစံအသစ် ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပြီလို့ ပြောလာပါတယ်။
အိမ်မှုကိစ္စ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာယွင်းမှုနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ပါ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူထားတာကြောင့် စင်ဒရဲလား အိမ်မှုကိစ္စ ဝန်ဆောင်မှုဟာ အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ အလျှော်အဖွတ်နဲ့ မီးဖိုချောင်လုပ်ငန်းတွေ ပါဝင်ပြီး အချိန်ပိုင်း၊ နေ့စဉ်နဲ့ အပတ်စဉ်ဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနေပါပြီ။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဖော်နဲ့အိမ်ရှင်ဟာ ကျွန်နဲ့သခင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်နေပြီး အခုလို အိမ်မှုကိစ္စဝန်ဆောင်မှုမှာ နည်းစနစ်ကျကျ ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရတယ်လို့ ဦးအောင်ကျော်မြင့်က ဆိုပါလာပါတယ်။
စင်ဒရဲလား အိမ်မှုကိစ္စဝန်ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီရဲ့ တစ်နာရီဝန်ဆောင်ခ ၂ထောင်၊ ပိတ်ရက်တွေမှာတော့ ၂၅ဝဝဖြစ်ပြီး တစ်ပတ် ၆နာရီစာအတွက် တစ်လကို ကျပ် ၄သောင်း၆ထောင်၊ တစ်နေ့လုံး ၈နာရီအတွက်ဆိုရင် တစ်လ တစ်သိန်းသုံးထောင်တစ်ထောင်ဆိုပြီး ဈေးနှုန်းတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အိမ်ဖော်ထက်စာရင် ဒီလို အိမ်မှုကိစ္စဝန်ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းဘဝက ပိုပြီးအာမခံချက်ရှိသလို ဘယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ပဲ အိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ကိုင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကုမ္ပဏီနဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်လို့ နော်အေးထွေးက ပြောပြပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက် သည် ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရုံ သာမက အသားအရေ ကို လှပ သန့်ရှင်း စေလိုသည့် ပျိုမေတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန် ဖြစ်ပါသည်။
၀က်ခြံ ၊ တင်းတိပ် ၊ အမည်းစက် များနှင့် မျက်နှာ အသားအရေ အရောင်မညီ ဖြစ်ခြင်းများ အတွက် စိတ်မပျက် ပါနှင့်။ ကန်စွန်းရွက်ကို ကြိတ်ပြီး ယင်း အရည် တစ်မျိုးတည်း လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာ လာစေနိုင်သည်။ ကန်စွန်းရွက် သတ္တုရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်းကို ပျားရည် တစ်ဇွန်းနှင့် သမအောင် မွှေကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို နေ့ည ပုံမှန် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် လည်း အသားအရေ ကို ၀င်းလက် စိုပြေလာ စေနိုင်သည်။
ဆံပင် မသန်၍ စိတ်ညစ်နေ သူများ အတွက် ကန်စွန်းရွက် အရည်ကို ညှစ်ပြီး ဦးရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် နှိပ်နယ် ပေးခြင်းဖြင့် ဆံကေသာကို အရှည်မြန် စေမှာ ဖြစ်သည့်အပြင် ဗောက် များကိုလည်း ကင်းစင် စေပါသည်။ မီးဟပ်ခြင်း နှင့် မီးလောင် ဒဏ်ရာများ အတွက် ကန်စွန်းရွက် အရည်ကို သကြား နှင့် ရောစပ်ကာ လိမ်းပေးခြင်း ဖြင့် အပူလောင်ခြင်း ကို သက်သာစေကာ အမာရွတ် မကျန် ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာတွင် ကျန်းမာရေး အမြင်ရှိသူ တိုင်းသည် သစ်သီးဝလံ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များက ကျန်းမာရေး အထောက် အကူပြု အာဟာရ အစားအစာ များအဖြစ် အရေးပါပုံ ကို သိမြင် လက်ခံ လာကြပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ငွေကုန် သက်သာကာ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ကန်စွန်းရွက်ကို စားသုံး ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်း ရေးသား လိုက်ရပါသည်။
အခုကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေ ပိုတောင် ရယ်စရာကောင်းလာသလိုပါပဲ။ တလောက ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်က သူဘာရာထူး (ကြီးကြီး) နဲ့ပါဆိုပြီး ဝင်ရှင်း တယ်။ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ အဲဒီလူကြီးခပ်ကြီးကြီးရထားတဲ့ ရာထူးဟာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်ရှင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်လူသာဆို ရှက်လွန်းလို့ လဲသေ သွားမလားပဲ။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ။ ကိုယ်ရထားတာ မဟုတ်တဲ့ရာထူးကြီး ယူထားပြီးခပ်တည်တည်နေတာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒါ ဘုရားဒကာကြီးနော်။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ။ ဘုရား ဒကာကိုယ်တိုင် ဒီလိုလိမ်ညာပြီး ပြောဆိုနေပြီဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်။ ကြာနီကန် ဆရာတော်ကြီး ပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်။
”ဘုရားထက်ကြီးတဲ့ လူကြီးဘုရားလူကြီး”။ ခေတ်ကိုက အဲဒီလို ဖြစ်နေတာ။
ကဲ .. အဲဒီလိုကိုယ်မဟုတ်တဲ့ရာထူးကို ခပ်တည်တည်ယူပြီးကိစ္စတွေ ဝင်ရှင်းတယ်ဗျာ။ ကဲ ..ဒါဟာ လိမ်လည်မှု မဟုတ်ဘူးလား။ သူနဲ့မှ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကို။ နောက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်။ ဒါဟာနာမည်အလွဲသုံးစားမှုရော ဖြစ်မနေဘူးလား။ တစ်နည်းပြောရရင် အသရေဖျက်မှုပဲဗျ။ နောက်ပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကို ခပ်တည် တည် ဝင်ေ ရာက် ဖြေရှင်းတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေမကျေနပ်တဲ့စကားလုံးတွေပြောပြီး ပြည်သူတွေသွေးဆူအောင် လုပ်တယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတော်ကို ဆူပူအုံကြွစေမှု မဟုတ် ဘူးလားခင်ဗျာ။ သူ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်မလိုဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့မှာတာဝန် ရှိပါသလဲ။ ဒီလောက်တောင် နိုင်ငံတော် လှုပ် လှုပ်ရွရွဖြစ်အောင် လူ တစ်ယောက်ကို နာမည်အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ အသရေဖျက်မှု၊ နိုင်ငံတော် ဆူပူအုံကြွစေမှုတို့နဲ့ တရားမစွဲသလဲဆိုတာလဲ သိချင်နေမိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တခြားသောအဖွဲ့အစည်းက တစ်ယောက်ယောက်များဆို မစဉ်းစားရဲစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဘုရားထက်ကြီးတဲ့ လူကြီး ဘုရားလူကြီးကတော့ ခပ်တည် တည် နဲ့ ဘုရားတရား သံဃာကောင်းမှုဖြင့် ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ရှိနေပါကြောင်းပေါ့ခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးရတဲ့ သတင်းကတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး ငွေသိန်းရာဂဏန်းခန့် အလွဲသုံးစားပြုမှုနဲ့ တရားစွဲထား တယ်ဆို တာ ပါပဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာအထိ အတိအကျနီးပါးမသိရသေးပေမယ့် ဟိုဘက်က ကိစ္စတွေဖြေရှင်းမပြီးသေးဘဲ နောက်တစ်ဖက်ကို လှည့်သွားတာကလည်း အံ့သြ စရာ အလှည့်အပြောင်းပါ ပဲ။ လူတွေအားလုံးအာရုံစိုက်နေတာက ဟိုဘက်ကအမှုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်က အမှုကလည်း ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတော့ အင်မတန်မှကို စဉ်းစားစရာပါပဲ။ လူတွေကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ အာရုံလွှဲလိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အာရုံများအောင် ရောချလိုက်တာလား။ ဒါမှမ ဟုတ်ရင် လူတွေ အာရုံစိုက် ခံနေရတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ပြဿနာရှိလို့ လုပ်ချလိုက်တာလားတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ရာထူးအဆင့်ကို အရေးယူ တာနည်း ပါးလှ တဲ့အထဲ အပါအဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ သမိုင်းဝင်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ငွေကြေးက နည်းနည်းလေးများ နည်းနေ သလားလို့ခင်ဗျာ။ အဲသည်လောက် ငွေကြေးလောက်ဆို အဲဒီအဆင့်ဘယ်သူ့ကိုမဆို တရားစွဲလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေချည်း ကြားနေရတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ရာထူး က နုတ်ထွက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဒါဟာလည်း ခုနက စကားနဲ့ ပြောရရင် ဒီဘက်နှစ်ပိုင်း နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်လောက်မှာ အဖြစ်အနည်းဆုံး ကိစ္စပါပဲ။ ပြည် သူတွေအပေါ် ဘယ်လောက်ရိုင်းရိုင်း၊ တရားဥပဒေမဲ့ အာဏာပြပြီး ဘာလုပ်လုပ် ပြည်သူတွေဘယ်လောက် အပြစ်ပြောပြော နုတ်ထွက်ကြရိုး ထုံးစံအင်မတန်မှကို ရှားပါးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့ လူမှုရေး ပဋိပက္ခတွေ မပြီးစီးနိုင်သေးတဲ့ ရခိုင်ဒေသကတော့ ဖြေရှင်းလို့ မလွယ်ကူနိုင်တာကြောင့် နုတ်ထွက်သွားတာ လည်း ဖြစ်နို င်ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခု ထူးဆန်းတာကတော့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို အနှိပ်ကွပ်ဆုံး ပြည်သူတွေအပေါ်လှည့်ပတ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုနေသူတွေ၊ အဂတိ အလိုက်စားဆုံးလို့ နာ မည်ကြီးသူတွေကတော့ တရားလည်း အစွဲမခံရ၊ နုတ်ထွက်ခြင်းလည်း မပြုကြတာ၊ တာဝန်ကရပ်စဲခြင်းခံရတာမျိုး မရှိသေးတာတော့ အံ့အားသင့် စရာ မြင်ေ တွ့နေ ရ တုန်းပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ပြည်သူတွေ မကြိုက်ဆုံးသူတွေကတော့ ခပ်တည်တည်ရှိနေသေးတာကလည်း လူတိုင်းအတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပါပဲ။
ခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင် နွေပူပူအချိန်မှာ လျှပ်စစ်မီးက မကြာမကြာပျက်တတ်ပေမယ့် မိုးတွင်းမှာဆိုရင်တော့ ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင် လျှပ်စစ်မီး ရတတ်ပါတယ်။ ဒီနှ စ်ကတော့ မိုးဦးကျမှာတင် လျှပ်စစ်မီးကထင်တာထက်ပိုပြီး ပျက်လို့နေတာပါပဲ။ ဒီကြားထဲ ရေမြောင်းတွေကလည်း အသေအချာ မပြုပြင်၊ ပြု ပြင်မပြီးသေး တာေ ကြာင့် မြောင်းရေ၊ ရေဆိုးများ ခိုပြီးခြင်တွေ ပေါက်ဖွားမှု နှုန်းထားပိုများနေတာလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲဒီရေမြောင်း၊ ရေ ဆိုးများမှာ ပေါက် ဖွားတဲ့ ခြင် များဟာလျှပ်စစ်မီးပျက်ပြီး မှောင်မဲမဲဖြစ်နေတဲ့ အိမ်တွေမှာပဲ ခိုပြီးပျော်ပျော် ကြီး နေပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီခြင်တွေ ကြောင့် သွေးလွန် တုပ်ကွေးေ ရာဂါဖြစ်သူတွေကလည်း ခါတိုင်းနှစ်ထက် ပိုများတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ လူကြီးတွေက သိပ်ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အို များ ဟာ ဒီဝေဒနာကို ပိုခံရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်မီးပျက်တာဟာ စီးပွားရေးသာမက ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ပြီမို့ ဆင်ခြင်ကြပါလို့ပဲ ပြော ချင်ပါတယ်။
ရေမြောင်းတွေဖျက်ပြီး မပြင်တာ နှစ်လရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိုးတွင်းကာလမှာ လွန်ရော ကျွံရောမှ လေးလသာ ရှိပါကြောင်း။
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ရဲစခန်းအနီး မြန်မာတစ်ဦး အသတ်ခံရ
ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာရန် စီစဉ်ထားသော မွန်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးမလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့ ရဲစခန်းအနီးတွင် ဇွန်လ ၂၆ ရက်က သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့ ပန်းထိမ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ် လုပ်နေသော ကိုတင်ထွန်းမြတ် ဆိုသူမှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ် ပီနန်မြို့ရဲစခန်းအနီးအရောက်၌ ပစ္စည်းလုခံရပြီးနောက် လည်ပင်းဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံပီနန်နာ ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗိုလ် မြက ပြောသည်။
‘‘သူက ရွှေပန်းထိမ်လုပ်တော့ လမ်းမှာပစ္စည်းလုခံရတာလို့ပြောတယ်။ လည်ပင်းမှာရော၊ ရင်ဘတ်မှာပါ ဓားထိုးခံရတာ။ သူကလာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့ လက်မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့သူပါ’’ဟု ကိုဗိုလ်မြက ပြောသည်။
သေဆုံးသူ၏ ဇနီးသည် မော်လမြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ငါးလရှိကြောင်း ကိုဗိုလ်မြက ပြောသည်။
‘‘ရဲစခန်းကိုလည်း ရောက်ပြီး ပါပြီ။ တရားခံကိုစုံစမ်းတုန်းပဲလို့ ပြောတယ်။ သတ်သွားတာ ဘယ် သူတွေဆိုတာစုံစမ်းလို့မရသေးပါ ဘူး။ မလေးရှားမှာ မြန်မာတွေ အသတ်ခံရတဲ့အမှုဆို ဘယ်အမှုမှ မိတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး’’ဟု ကို ဗိုလ်မြကပြောသည်။
ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ရေသန့်ဘူးထဲ လိင်စိတ်ကြွဆေး ခပ်တိုက်၍ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး အင်တာနက်တင်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သူကို အမှုဖွင့်
ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့ ၌ ဧပြီ ၁၄ ရက်တွင်ဒသမတန်း ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို ရေသန့်ဘူး
ထဲ၌ လိင်စိတ်ကြွဆေး ခပ်တိုက်၍ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝက်လက်မြို့နယ် ဟန်လင်းမြို့ ဟောင်းတွင် နေထိုင်သည့် တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တား သည် ကန့်ဘလူမြို့ မြန်မာ - အာရဗီ သိပ္ပံကျောင်း၌ ကျောင်းတက်ရန် ဇနီးဖြစ်သူ၏ အဒေါ် နေအိမ်၌ သွားရောက် နေထိုင် ခဲ့သည်။ ထိုသို့ တည်းခို နေထိုင်စဉ် ဧပြီ ၁၄ ရက် ည ၁၂ နာရီက အဆိုပါ နေအိမ် အပေါ်ထပ်တွင် စာကျက် နေသည့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ၁ဝ တန်း ကျောင်းသူ မ----၏ ရေသန့်ဘူးကို ရေဖြည့် ပေးမည်ဟု တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တား က ယူဆောင် သွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရေသန့်ဘူး အတွင်းမှ ရေများကို မ----- က သောက်သုံး မိခဲ့ရာ ကိုယ်ခန္ဓာ ခြေလက်များ လှုပ်ရှားမရ ချိန်၌ တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တားက အလို မတူဘဲ အဓမ္မ ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန် ၂ဝ ရက်က အမည်မသိသူ တစ်ဦးသည် မ----၏ မိဘများထံ ရောက်လာပြီး စာတစ်စောင် နှင့် ဒီဗွီဒီ အခွေ တစ်ချပ်ကို တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တား က ပေးခိုင်း၍ လာရောက် ပေးကြောင်း ပြောပြ၍ ပေးသွား ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စာကို မ---၏ မိဘများက ဖွင့်ဖောက် ကြည့်ရာ တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တား က မ----ဆို သူနှင့် သားမယား အဖြစ် နေထိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အပျိုစင် ဘဝကို ဖျက်ဆီးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မ-----နှင့် သားမယား အဖြစ် နေထိုင်သည် ကို ဗီဒီယို ရိုက်ကူး ထားကြောင်း၊ ထိုအခွေကို ပို့လိုက်ကြောင်း၊ မ----နှင့် ၄င်းကို မပေး စားပါဘဲ တိုင်ကြားပါက အင်တာနက် ပေါ်တင်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး သိ၍ အရှက်ရ စေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါစာတွင် ခြိမ်းခြောက် ဖော်ပြထား သည်ကို မ-----၏ မိဘများက ဖတ်ရှုသိရှိ ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် မ------မိဘများက ကန့်ဘလူမြို့မ ရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့် အရေးယူ ပေးရန် တိုင်တန်း ခဲ့သည်။
အဆိုပါ တိုင်တန်းချက် နှင့် ပတ်သက် ၍ ကန့်ဘလူမြို့မ ရဲစခန်းက ဇွန်၂၇ ရက် ည ၈ နာရီခွဲက တေဇာဝင်း (ခ) မွတ်တား ကို ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်စဉ် အမှတ်၈/၂ဝ၁၄ (ပ)၁၇၇/၂ဝ၁၄ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုဖွင့် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၅၄)
အစိုးရအဖွဲ့၏ အတွင်းရေး အရှုပ်တ်ာပုံများ - သံဖနောင့်
လေးဆယ်ကျော်ရှိသည်။ အကြံပေး အချင်းချင်းပင် သမ္မတတွင် အကြံပေးမည်မျှ ရှိသည်ကို တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပေ။ သမ္မတရုံးတွင် ၀န်ကြီးငါးဦး ရှိသည့်အနက် ဦးစိုးသိန်းသည် သမ္မတ၏ အခန်းသို့ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ၀င်ထွက်ခွင့်ရသည်။ အခြား ၀န်ကြီးများ ၀င်လိုက ကိုယ်ရေးအရာရှိ မှတစ်ဆင့် ခွင့်တောင်းပြီးမှ ၀င်ရသော်လည်း ဦးစိုးသိန်းမူ သမ္မတ ရုံးခန်းတံခါးကို သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီး ၀င်လိုသည့် အချိန် ၀င်နိုင်သည်။ နာဂစ်ကာလက ရေတပ်မှ စစ်သင်္ဘော သုံးစီး နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရတော့မည့် ဦးစိုးသိန်းကို တစ်ပတ်စဉ်ထဲ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ အသနားခံပြီး ကယ်တင် ထားခဲ့သည်ဟုလည်း အတွင်းသိများက ပြောဆိုနေကြသည်။
သို့သော် ဦးစိုးသိန်းသည် သူ၏ ကယ်တင်ရှင် ဦးသူရရွှေမန်းကို မောက်မာစွာ ဆက်ဆံသည်။ ဦးရွှေမန်းက စကားပြောလျှင်ပင် ပြန်ပြောချင်မှ ပြောသည်ဟုလည်း နာမည်ကြီးသည်။ အစိုးရ ၀န်ကြီးများ အတွင်းတွင် အမောက်မာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဟုလည်း နာမည်တစ်လုံး ရထားသူဖြစ်သည်။ စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးကား အခြား ၀န်ကြီးများနှင့် ယှဉ်တိုင်း အပြောဆိုခံရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲ ရိုးရိုးသားသား စစ်သားပါဟု ရင်ဖွင့်လေ့ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ၃၆ဦးတွင် ပညာရေး ၀န်ကြီး၊ စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီး၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀န်ကြီး၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီး၊ အားကစား ၀န်ကြီးတို့ ၈ဦးသာ အရပ်သားများ ဖြစ်ပြီး ကျန်ဝန်ကြီး ၂၈ပါးမှာ စစ်ဗိုလ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအထဲတွင်လည်း စစ်တက္ကသိုလ်မှ ဆင်းသည့် ၀န်ကြီးက ၂၅ဦးပါပြီး ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်းဆင်း ၀န်ကြီးမှာ ၃ပါးသာ ပါရှိသည်။ စစ်ဗိုလ်ဝန်ကြီး ၂၅ပါးတွင် လေတပ်မှ ၂ဦး၊ ရေတပ်မှ ၂ဦးပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀န်ကြီးများကို အချိုးကျ ကြည့်လျှင် စစ်ဗိုလ်များက ၇၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အရပ်သားများက ၂၂.၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တစ်ဖန်စစ်ဗိုလ်များကို အချိုးချကြည့်လျှင် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းများက ၈၉.၂ရာခိုင်နှုန်း ၀န်ကြီးများ နေရာများ ရရှိထားပြီး ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်းဆင်းများက ၁၀၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိထားသည်။
သမ္မတကြီးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ် ၉မှဖြစ်ပြီး သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီး ဦးမြင့်အောင်မှာ သမ္မတနှင့် တစ်ပတ်စဉ်ထဲ ဖြစ်သည်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်၊ သမ၀ါယမ ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းတို့သည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၁ သင်တန်းဆင်းများ ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးရွှေမန်းနှင့် တစ်ပတ်စဉ်ထဲ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၀မှဖြစ်သည်။ သမ္မတ၀န်ကြီးရုံး ဦးသိန်းညွန့် သည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၂မှဖြစ်သည်။ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၃မှဖြစ်ပြီး ဦးနေ၀င်း လက်ထက် ထောက်လှမ်းရေးများကို ဖြိုခွင်းခဲ့စဉ် ကျန်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၅တွင် ၀န်ကြီးများအဖြစ် ဦးလှထွန်း၊ ဦးဆန်းဆင့်၊ ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးခင်မောင်စိုး၊ ဦးဌေးအောင်တို့ ဖြစ်သည်။ စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၆မှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တစ်ဦးရှိပြီး စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၇မှ ဦးမြင့်လှိုင်၊ ဦးမြတ်ဟိန်း၊ ဦးအုန်းမြင့်၊ ဦးခင်ရီ၊ ဦးသန်းဌေး၊ ဦးစိုးမောင်၊ ဦးတင်နိုင်သိန်း ၀န်ကြီး ၇ပါးရှိသည်။ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၈မှ ဖြစ်သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်သည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၁၉မှ ဖြစ်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် တစ်ပတ်စဉ်ထဲ ဖြစ်သည်။ စက်မှုဝန်ကြီးသည် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၂၀မှဖြစ်ပြီး ဦးဇေယျာအောင်သည် စစ် တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၂၂မှဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်းဆင်းများမှ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး၊ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးနှင့် အလုပ်သမား ၀န်ကြီးတို့ ၃ဦး ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ အများစုက အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေး ကက်ဘိနပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တို့ကို လူသိများသော်လည်း နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး ကော်မတီဆိုသည့် ဦးစိုးသိန်း ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်နေသော အဖွဲ့ကို လူသိနည်းသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများက တင်ပြလာသော ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ဆိုရလျှင် စစ်အစိုးရခေတ်က ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒ ကောင်စီ၏ အလုပ်ကို လုပ်သည်။ ထိုနေရာမှ သတင်းဦး ရသူသည် စီးပွားရေးလောကတွင် နေ့ချင်းသူဌေး ဖြစ်သွားနိုင်သည့် စီးပွားရေး မူဝါဒ ချမှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။ ကားအိုကားဟောင်းများ အပ်ပြီး ကားသစ်များ ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့် သတင်းကို ကြိုတင်ရရှိသူများက နယ်အနှံ့ ကားအိုကားဟောင်းများ ဆင်းဝယ်ပြီး အချီကြီးပွသွားသည့် ကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။
အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းတွင်လည်း သမ္မတ၏ သဘောကောင်းမှုကို အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အဖြစ် ယူနေသူများလည်း ရှိသည်။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကို အပုပ်နံ့ အထွက်များသဖြင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရန် ကြံစည်ခဲ့သော်လည်း ဦးကျော်ဆန်းက သူ့ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားပါက လည်ပင်းတွင် စာဆွဲပြီး လွှတ်တော်ရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြမည်ဟု ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက်သဖြင့် ၀န်ကြီးဌာနသာ ပြောင်းလဲလိုက်ရသည်ဟုလည်း သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးသည်။ လက်ရှိတွင်လည်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ဌာနသည် စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အသံများ ထွက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးကို သမ္မတရုံးတွင် တွဲဖက် ထိုင်စေပြီး ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို ကိုင်တွယ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုသမ္မတက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်ကို ရာထူးမှ ထွက်စာတင်ရန်ပြောရာ ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်က မထွက်ဘူးဆိုရင်ရောဗျာဟု ပြန်လည် တုန့်ပြန်သဖြင့် ရာထူးမှ မဖယ်ရှားရဲပဲ ထားနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
အထူးသဖြင့် သမ္မတအနီးမှ အကြံပေးများနှင့် ၀န်ကြီးအချို့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ရယူနေကြသည်။ ယခုလည်း သန္တိသုခကျောင်း ကိစ္စတွင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသော ဦးအံ့မောင်သည် သမ္မတရုံး အကြံပေး မဟုတ်ပါဟု သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ငြင်းဆိုသွားသည်။ သို့သော် ဦးအံ့မောင်သည် ရန်ကုန် ကမ္ဘာအေးရှိ သာသနာရေး ဦးစီးဌာနတွင် ရုံးတက်နေပြီး ရုံးခန်းတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်ဟု မည်သည့်အတွက် ဆိုင်းဘုတ် ချိတ်ထားသည်ကို စဉ်းစားရန် ဖြစ်လာသည်။ သန္တိသုခကျောင်းကို စစ်ပွဲပုံစံညဘက် စီးနင်းရာတွင် တာဝန်ရှိသော သာသနာရေး ၀န်ကြီးကိုလည်း ရာထူးမှ အနားပေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ စိတ်နေစိတ်ထားအရ တစ်နှစ်သာ ကျန်တော့သည့် အစိုးရ သက်တမ်းတွင် ၀န် ကြီး အားလုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး မဖြုတ်ပဲ လက်တွဲခေါ်ယူသွားမည့် အခြေအနေက ပိုဖြစ်နိုင်သည်ဟု အတွင်းသိများက ပြောကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးခုတွင် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကလည်း လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေသည်။ လွှတ်တော်တွင် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်သည် ပြိုလုဖြစ်နေပြီဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း တရားရေးမှ တာဝန်ရှိသူများက မည်သူ့ကိုမျှ မကြောက်၊ ချချင်သည့် အမိန့်တွေ ချနေကြသည်။ လာဘ် စားမြဲစားနေကြသည်။ ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၏ လက်အောက်တွင် နေခဲ့သဖြင့် အညှိုးနှင့် လက်စားချေနေသလား ထင်ရအောင် မတော်မတရား အမိန့်များချသည်။ လက်နက်မှုသည် အာမခံ မပေးရဟု ဆိုသော်လည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အာမခံပေးပစ်သည်။ စီရင်ချက်အတွက် အနည်းဆုံး ပြစ်ဒဏ်နှင့် အများဆုံး ပြစ်ဒဏ်ကြားတွင် တရားရေး မဏ္ဍိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများ ပျော်ပျော်ကြီး ခရီးနှင် နေကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူ လူကြီးတစ်ဦးက ဒီတရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြောင့် ဘာမှအုပ်ချုပ်လို့ကို မရတော့ပါဘူးဟု ငြီးတွားရသည့် အခြေအနေ ရောက်နေသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အစိုးရသည် တစ်ပါတီတည်း ဖြစ်သော ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင် လွှတ်တော် အမတ်များ၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော် နာယကတို့နှင့်လည်း အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသည်။ လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက သမ္မတနှင့် တရားဝင် တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းထားသည်မှာ ခြောက်လကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သမ္မတက တွေ့ခွင့်မပေးဟု အမျက်ထွက်သည်။ သမ္မတကလည်း သူရဦးရွှေမန်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကြိမ် ၇ ကျော် အဘယ်ကြောင့် တွေ့ဆုံသနည်းဟု မေးခွန်း ထုတ်ပြန်သည်ဟု ကြားရသည်။ မေလတွင် တပ်မတော်က စာမျက်နှာ ခြောက်မျက်နှာပါသော စာတစ်စောင်ကို သမ္မတနှင့် လွှတ်တော် နာယကထံပို့သည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်သည်။ စာထဲတွင် မည်သည်တို့ကို ရေးထားသည်ကို မသိသော်လည်း ထိုစာရပြီးနောက် သမ္မတ၊ လွှတ်တော် နာယကနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ကြသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ မေလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကို တံခါးပိတ် ကျင်းပပြီး ပါတီ လျှောက်လှမ်းမည့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ယခု အပတ်တော့ ဤမျှနှင့် နားပါဦးမည်။ ရှေ့ပတ်တွင် လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် မီဒီယာများအကြား အရှုတ်တော်ပုံများ ရေးပါဦးမည်။